၈၈ ရဲ့ နော်မန်: 1/9/11 - 1/16/11
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ နျူးကလီးယားစီမံကိန်း နှင့် ဗိုလ်မှူးဟောင်း စိုင်းသိန်းဝင်း - အပိုင်း (၄)
အပိုင်း(၃) ကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား...
ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ လက်နက်ငယ်တွေမှာ ဆိုရင်လည်း ပြဿနာတွေက engineering အနေနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ interchangeability (အစိတ်အပိုင်း အချင်းချင်း ဖလှယ်တပ်ဆင်နိုင်မှု) မရှိတာပေါ့။ (အမှတ်စဉ် နံပါတ်တခုနှင့် ထုတ်လုပ်ထားသော သေနတ် တလက်၏ မောင်းတုံးကို အမှတ်စဉ်နံပါတ် မတူညီသော အမျိုးအစားတူ သေနတ်တလက်ထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့ထည့်သွင်း မရနိုင်သည့် စနစ်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် သေနတ်များ ထုတ်လုပ်နေခြင်းကို ဆိုလိုသည်) ကျနော်တို့ ဒီသေနတ်လေး တစ်လက်မှာ အစိတ်အပိုင်း ပေါင်း(၁၆၃)ခု ရှိတယ်ဆိုရင်၊ ဒါ စက်ရုံက ထွက်လာတာတွေကို ကျနော်တို့ ကောက်တပ်လိုက်မယ် ဆိုရင်၊ အားလုံးဟာ သူ့နေရာနဲ့သူ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်သွားရ မယ်။ အခုဖြစ်နေတာက အဲဒီ အစိတ်အပိုင်းပေါင်း (၁၆၃)ခုဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်ဘဲနဲ့ တချို့နေ ရာတွေ တံစဉ်း(file) နဲ့ တိုက်ရ တာတွေ ရှိတယ်။ တချို့နေရာတွေကျတော့ တူနဲ့ ရိုက်နှက်ပြီးတော့ ထည့်ရတာတွေ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်း စဉ်မှာ နှေးကွေးကြန့်ကြာတာတွေ ရှိတယ်။ ပိုက်ဆံ ပိုပြီး ကုန်ကျတာတွေ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ သေနတ်တွေက ထုထောင်းရိုက်နှက်ပြီးတော့ ဒါကို သေနတ် တလက်အဖြစ် ပုံစံသွင်းလိုက်ရတဲ့ အခါမျိုးကျတော့ ဒီ လက်ဖြစ်သေနတ် တူးမီးလောက်တောင်မှ အဆင့် မရှိဘူး ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး တွေလည်း ရှိပါတယ်။ သေချာပါတယ် ဗျာ။ နိုင်ငံခြားသေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ သူပုန်နဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာ့တပ်မတော်က အမ်အေ (Myanmar Army အမည်နှင့် သေနတ်များ) ကိုင်ထားတဲ့ စစ်ဗိုလ် ယှဉ်ပစ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စစ်ဗိုလ်က သေဖို့ သေချာနေပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေတာ ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ လက်နက်ငယ်၊ လက်နက်ကြီး၊ ဗုံးသီး၊ အမြောက်ကျည်ဆံ အဲဒါတွေကအစ ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေပြီးတော့ တပ်တွေမှာလည်း တပ်ပြေးဆိုတာ လတိုင်းမှာ တစ်လကို ဘယ်လောက်ပဲ အပေါ်ကို စာရင်းတင်ရင် များလွန်းအားကြီးလို့ စာရင်းလျှော့ ပြနေရတယ်။ ပြေးကြတဲ့ အထဲမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့ နော်၊ အခု အရာရှိတွေ ဆိုတာ အများကြီးပါလာ ပြီ။ အဲဒီတော့ ဒီလောက် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကြားထဲကပဲ တပ်မတော်ကြီးဟာ အင်မတန်ကို အင်အားခိုင်မာတောင့်တင်းပြီးတော့ တိုင်းပြည်အတွက် ကာကွယ်ရေး စွမ်းရည်အပြည့်နဲ့ ရှိနေပါတယ် ဆိုပြီးတော့၊ စစ်ကျောင်းကြီးတွေရဲ့ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းပွဲတွေ၊ တပ်မတော်အခမ်းအနား၊ ဟိုအခမ်း အနား ဒီအခမ်းအနားတွေမှာ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောဆိုပေးနေတာတွေ အပေါ်မှာ တပ်မတော်သားတွေ အနေနဲ့ ယုံကြည်မှု ရှိနိုင် ပါ့မလား ခင်ဗျ။ အခု ဗိုလ်မှူးတို့လို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ နေရတဲ့လူ၊ ကိုယ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဟာ ရှေ့တန်းမှာ တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ တပ်မတော်သားတွေအတွက် ဒုက္ခပဲရောက်ဖို့ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာလည်းသိနေတယ်။ သိသိကြီးနဲ့ပဲ အကုန်လုံးလုပ်နေကြတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီလို အနေအထားမျိုးနဲ့ ဘက်စုံ ကဏ္ဍစုံ၊ တတိုင်းပြည်လုံးမှာ ဘယ်ကဏ္ဍမှ ဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍ မကျန်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ ဟိုတနေ့က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ပြောသွားတယ်။ ကိုယ့်တပ်မတော်၊ ကိုယ့်ကဏ္ဍ၊ ကိုယ့်ကာကွယ်ရေး ကဏ္ဍမှာတောင် အဲဒီလောက်တွေ ဖြစ်ပျက်နေတာ သူတို့ အထိတော့ ထားပါတော့၊ အဆင့်ဆင့်ကကော သိကြရဲ့လားခင်ဗျ။ သိလျှက်သားနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ နေနေကြတာလား။ ဒါ ကြီးကို ရှင်းလို့မရလို့ "ဒီအတိုင်းပဲ ထားလိုက်ကြ၊ ငါ့လက်ထဲမှာ မဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲ" ဆိုတဲ့ အနေအထားနဲ့ သွားနေတာလား ခင်ဗျ၊ ဗိုလ်မှူးရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ဘယ်လိုရှိပါသလဲ၊ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ခင်ဗျ။
ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ ကျနော်ကတော့ ဒီ တပ်မတော်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေ တပ်မတော်တင်မက နိုင်ငံတော်ပါ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူ တွေက စေတနာမမှန်ဘူးလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်ရာမှာတင်မက လမ်းတံတားတွေဖောက်တဲ့နေရာမှာ ဆိုရင် လည်း သူက ဖောက်တယ်သာပြောတယ်လေ၊ တံတားတစ်စင်းက ဘယ်လောက်ကြာကြာ ခံမလဲဆိုတာ သူတို့မှ ထည့်မပြောတာ။ ပြီးတော့ ဒီ တံတားတစ်စင်း ဖောက်လိုက်လို့ သူတို့အိတ်ထဲကို လာဘ်လာဘတွေ ဘယ်လောက်ဝင်သွားမလဲဆိုတာ လူတိုင်းက အကုန်သိနေတာပဲ။ သူတို့ လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကိုတော့ အောက်ခြေတပ်မတော်သားတွေက အယုံအကြည်မရှိပါဘူး။ အကုန်လုံးက ကြောက်လို့သာ ငြိမ်နေကြတာပါ။ သူ တို့ရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို အယုံအကြည်မရှိတာ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ စစ်တပ်ထဲမှာ နေကြတဲ့လူတွေက ကျနော်တို့ စစ်သားစကားပေါ့ဗျာ၊ ခပ်ရိုင်းရိုင်းပဲ ပြောကြပါတယ်။ “လုပ်တော့ လက်တန်း၊ တိုင်းတော့ မျက်မှန်း ၊ ပြောတော့ေ_ာက်သရမ်း” ဆိုတာ ဒီ "လူကြီး"တွေ (လက်ရှိ မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ) လုပ်နေတဲ့ ဥစ္စာကို ကျနော်တို့ စစ်သားတွေ ပြောနေကျ စကားပါပဲ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ၊ အခု မကြာသေးခင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ဝေါလေတိုက်ပွဲ။ ဝေါလေတိုက်ပွဲကို အခု အမေရိကန်တပ်မတော်က ပြန်သုံးသပ်ထားတာ၊ သူတို့ကတော့ အပေါ်ကနေပြီးတော့ လေကြောင်း aerial photo (ကောင်းကင်ဓါတ်ပုံ) တွေ ဘာတွေနဲ့ ကြည့်ပြီး၊ သူတို့ပြောတာက သူတို့ ထင်တောင် မထင်ဘူး။ ဒီ ဝေါလေကို မြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ ခံစစ်စည်းချတာ တကယ့် အခြေခံလုပ်ရမယ့် ဟာတောင်မှ အခြေခံအတိုင်း မသွားဘူး။ chopper (ရဟတ်ယာဉ်) ထားရမယ့်နေရာနဲ့ command center (အမိန့်ပေးနေ ရာ) နဲ့ နေရာလွဲတာတို့ ဘာတို့၊ အဲဒါကြောင့်မို့ အခု ဒီ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ တက်သိမ်းတဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူနဲ့ သူတို့ ကျ သွားတယ်။ တပ်စခန်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ ဟာမျိုးတောင်မှ နော်၊ သူတို့ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ အခု အဖက်ဖက်က နေ ဒီလိုမျိုး ချွတ်ချုံကျနေတာ လက်နက်ခဲယမ်းပိုင်းကော၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ အရကော၊ အရာရှိတွေကော စစ်သည်တွေကော တပ်ပြေးတွေ ဒီ လောက်များတာကော၊ တိုက်ပွဲတစ်ပွဲကို နိုင်အောင် မတိုက်နိုင်တော့ဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒါမျိုးတွေ ဖြစ်လာတဲ့ဟာ တကယ်တမ်း ပြည်ပရန်နဲ့ ကြုံ ရင် ဒီတပ်မတော်က ဒီတိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါဦးမလား။ ဗိုလ်မှူးရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ အစောက ပြောတဲ့ ဝေါလေ တိုက်ပွဲမှာ chopper တွေကို ဒီ ဗျူဟာကုန်းရဲ့ အနောက်မှာ ထားတယ်ဆိုတာက ဗျူဟာမှူး အနေနဲ့ ပူပန်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်ကအရာရှိတွေကို အင်မတန် ထူးဆန်း တယ်လို့ပဲ သုံးသပ်ကြမှာပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်က အရာရှိတွေက စက်ယန္တယားတွေကို လူထက်ပိုပြီးတန်ဘိုးထားကြပါတယ်။ ဒီ chopper တွေကို ဗျူဟာကုန်းရဲ့အနောက်မှာ ထားရတယ်ဆိုတာကလည်း မတော်တဆ ပျက်စီးသွားမှာစိုးလို့ ရဲဘော်တွေကို အရှေ့မှာခံပြီး chopper တွေကို အနောက်မှာ ထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ရဟတ်ယဉ် တစ်စီး ပျက်ကျသွားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ ဗျူဟာမှူးက စုံ/ခုံ (စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးခုံရုံး) တက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ပြဿနာလေးတွေရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ တပ်မတော်မှာ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒါ သေနင်္ဂဗျူဟာအခြေခံအရ တောင်ကုန်းတစ်ကုန်းကို ခံစစ်စည်း (၃)စည်း လုပ်တဲ့နေရာမှာ၊ အလယ် ဒုတိယစည်းမှာ ဒီ chopper တွေက ထားရမယ်၊ command က နောက်ဆုံးစည်းမှာ ထားရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသားပဲ၊ တပ်မှာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ က chopper တွေကို နောက်ပို့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက chopper တွေများ တစ်ခုခု ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့မယ် ဆိုရင် စစ်ခုံရုံး တက်ရမှာစိုးလို့ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ ဖြစ်ရတယ်လို့ ဗိုလ်မှူးက အခုပြောပြတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုမျိုး လွဲချော်နေတဲ့ဟာက ခုနက ဗိုလ်မှူးပြောသလို ပစ္စည်းက လူထက်ပိုပြီး တန်ဘိုးရှိနေလို့ ဒါကို ကာကွယ်ရတာ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ စစ်သဘောတရားအရ အမှားကြီးကို သူတို့ လုပ်တဲ့ဟာက အခု ဒီမှာ အပေါ်က aerial photo နဲ့ ကြည့်တဲ့လူတောင်မှ သိနေတဲ့ ကိစ္စ။ ဆိုတော့ အဲဒါတွေက အထက်ကို ပြန်တင်ပြ လို့မရဘူးလား၊ ဒီ တိုက်ပွဲဟာ ကိုယ်က မကျဖို့ အရေးကြီး တာပေါ့။ အခုတော့ ဒီ chopper တွေကတော့ လွတ်ထွက်သွားပါရဲ့၊ ခုနက ပြောသလို နောက်ဆုံးမှာ ထားလို့၊ ဒါပေမယ့် ဒီတောင်ကုန်းကတော့ ကျသွားတယ်။ ဆိုတဲ့ဟာက၊ နောက် အများကြီးလည်း ကိုယ့်ဘက်က သေတာပေါ့။ ဒါမျိုးကို ပြန်ပြီး တော့ တင်ပြလို့ မရဘူးလား။
ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ မရနိုင်ပါဘူး ခင်ဗျာ၊ ဒါကတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီ ရှေ့တန်းအပို့ခံရတဲ့ ဗျူဟာမှူး ဆိုတာလည်း အမြင်ကပ်လို့ အပို့ခံရတဲ့ ဗျူဟာမှူးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ "ရှေ့တိုးလည်း ထမ်းပိုး နောက်ဆုတ်လည်း လှည်းတုတ်" ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါ။ သူတို့ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကလည်း များသောအားဖြင့် အလုပ်သင်က ဖြစ်တဲ့ (အလုပ်သင်ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းဆင်း) ဗျူဟာမှူးတွေကိုပဲ အဲဒီ လိုမျိုး အနှိမ်ခံဗျူဟာမှူးတွေကိုပဲ ရှေ့တန်းကို ပို့တာရှိတယ်။ DSA ဆင်းဆိုရင်လည်း တော်တော်ကြီးကို သူတို့ မျက်မုန်းကျိုးတဲ့လူတွေကိုပဲ ပို့ တာရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ခုန ဗျူဟာမှူးက လက်တွေ့အကျဆုံး အလုပ်ကို သူ လုပ်သွားတာပါပဲ။ လူတွေ အသေခံပြီးတော့ ရဟတ်ယာဉ်တွေကို ကာကွယ်သွားရတဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဗျူဟာမှူးက ပြီးရင် စစ်ခုံရုံးတက်ရမှာပါပဲ၊ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ DSTA ပေါ့နော်၊ "တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်"ဆိုတာက ပြောမယ်ဆို စစ်အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်ပေါ့၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာဆိုတာ ဟိုခေတ်က B.Sc Engineering နောက် R.I.T ဆင်း၊ အဲဒါကို O.T.S တက်ပြီးတော့မှ ရွေးပြီးခေါ်တယ်။ အခု အဲဒါ ကို မဟုတ်ဘူး (၁၆)နှစ် (၁၇)နှစ်သားကတည်းက လူငယ်ဘ၀ကတည်းက စစ်ထဲဝင်လာတဲ့ ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လူမျိုးကိုမှ DSA ပုံစံမျိုး နဲ့ ရွေးထုတ်ပြီးမှ မွေးမြူမယ်ဆိုတဲ့ ဟာမျိုးနဲ့ သူတို့လုပ်လာတာ။ DSTA ကော DSMA လည်းရှိသေးတယ်။ "တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်"၊ ဆိုတော့ အဲဒီလိုမျိုး သူတို့ ယုံကြည်ပါတယ် ဆိုပြီးတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မွေးပြီးတော့မှ ထောင်လာတဲ့ တက္ကသိုလ်ကထွက်တဲ့ ဗိုလ် မှူးဆိုရင် ဒါ DSTA အပတ်စဉ် (၁)က ထွက်တာ၊ အဲဒီတော့ အဲလို ဗိုလ်မှူးတောင်မှ ဒီလိုမျိုး သူတို့ လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာ ကိုယ်သဘောမတွေ့တဲ့ ကိစ္စဖြစ်လာတော့ အဲဒီ DSTA ကို တက်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ နောက် ရုရှ သွားပြီးတော့ ပညာသင်ရတဲ့ အကြောင်းကို ချုံငုံပြီး ပြောပေးပါခင်ဗျ။
ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ DSTA ကို join တာကတော့ စစ်ထဲဝင်လိုက်တယ် ဆိုတာထက် ကိုယ်က တက္ကသိုလ်တစ်ခုကို တက်လိုက်တဲ့ သဘောပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်သားစိတ်ပေါက်သွားတယ် ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ စစ်သင်တန်း တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူသွားတယ်။ အတူတူစားတယ်။ အဲဒီလို နေလာတဲ့ အခါကျမှသာ ကျနော်တို့က စစ်သားစိတ်ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ စစ်သားစိတ်ဖြစ် လာတဲ့ အခါမှာလည်း ကျနော်တို့က ဒါ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့၊ ပြည်ထောင်စုသား အားလုံးကို ကာကွယ်ဖို့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ရှိနေ တဲ့ ပြည်ထောင်စုသားဆိုရင် ကျနော်တို့ ကာကွယ်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေက အလွဲသုံး စား လုပ်ခံရတယ်ဆိုတာကတော့ မြင်လာတယ်ဗျ။ ကျနော့်အနေနဲ့ ပိုပြီးတော့ သိသာမြင်သာတာကတော့ ဒီ "လူကြီး" တွေရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံဟာ စေတနာမမှန်တာကို ကျနော်တို့က သိတော့ သိလာတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အချိန်မှာ ယူနီဖောင်း တစ်ရောင်တည်း ၀တ်ထားတဲ့လူအနေနဲ့ ၊ ပြီးတော့ ကိုယ်အလေးပြုနေတဲ့ လူအနေနဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ဘာမှ ပြန်ပြီး ဝေဖန်ဖို့အတွက် စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ ဗျာ။ ရဲရဲမတွေးရဲဘူးပေါ့၊ အဲဒီ အချိန်မှာ နောက်ပိုင်းမှာ ရုရှကို ပညာတော်သင် သွားရတယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ ပိုပြီးတော့ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသွားတယ်။ ပထမဦးဆုံး အင် တာနက်ကို စသုံးလာရတယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ ပိုပြီးတော့ တခြားစာပေတွေ လေ့လာခဲ့တာရှိတယ်။ တခြား မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တွေ့ ကြုံလာတာရှိတယ်။ အဲဒါပြောဆို ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ကမှ ပိုပြီးတော့ မျက်စိပိုပွင့် လာပြီးတော့မှ၊ နောက်ဆုံး တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမယ်ထင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ကျနော် လုပ်ခဲ့တာပါ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဗိုလ်မှူးကို ဗိုလ်မှူးမဖြစ်သေးဘဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗိုလ်မှူးလို့ ပြောတယ် ဘာညာ သူတို့ သတင်းစာတွေက ရေးတယ်။ ကျနော်တို့ သိထားသလောက်ကတော့ officiating (တစ်နှစ် အစမ်းခန့်) ဗိုလ်မှူးဆိုရင်၊ ဒါ အပွင့်မတင်သေးခင်စပ်ကြားမှာ တပ်ထဲမှာ လူတိုင်း က ဗိုလ်မှူးလို့ပဲ ခေါ်ရတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျနော်တို့က ဗိုလ်မှူးပဲ ခေါ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တောင်မှ ဒီမှာ အသက် (၈၀) နားနီးနေပြီ။ တပ်မတော် အက်ဥပဒေနဲ့ ဆိုရင် ကျနော်တို့ ကြားဖူးတာ ပုဒ်မ (၆၅) " စစ်စည်းကမ်းကျနမှု" ကို ဖောက်ဖျက်ပြီး ကိုယ်ကတော့ အငြိမ်းစား မယူဘဲနဲ့ သူများကို အသက်(၆၀) မှာ အငြိမ်းစားယူခိုင်းပြီး သူတို့လုပ်နေတယ်။ ဗိုလ်မှူးက officiating မစေ့ခင်မှာ ထွက်လာတဲ့ဟာ ကို သူတို့က ဘာပဲပြောပြော ကျနော်တို့ကတော့ ဗိုလ်မှူးကို ဗိုလ်မှူးလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ နောက်တခါကျတော့ ဗိုလ်မှူးက ဒီအတိုင်းပဲနေသွားရင် လည်းပဲ officiating ပြည့်ပြီး ဗိုလ်မှူးဖြစ်၊ နောက် မကြာခင်မှာပဲ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးပေါ့ နော်၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဆိုတာ ပထမတန်း First Grade ထဲက ဒါ တံခါးဝပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီတံခါးဝကို ဗိုလ်မှူးက ရောက်ခါနီးနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှ၊ ဒီကိစ္စကို ငါ ရအောင်လုပ်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ဘယ်အ ကြောင်း အရာကစေ့ဆော်ပြီး ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ကို ပြောပြပေးပါ ခင်ဗျ။
(မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် အရာရှိများအား ဒု-ဗိုလ် မှ ဗိုလ်ကြီး အထိ Third Grade အရာရှိ၊ ဗိုလ်မှူးအား Second Grade အရာရှိ၊ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးနှင့်အထက် အရာရှိကြီးများအား First Grade အရာရှိ ဟု ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။)
ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ မြန်မာပြည်ကို ဘယ်သူမှလည်း လာပြီး ကျူးကျော်စရာ မရှိဘူး။ သူတို့က တချိန်လုံး ဒါ ပြည်ပကျူးကျော်စစ်ကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြီးနဲ့ပဲ တောက်လျှောက်လုပ်နေပါ တယ်။ အဲဒီမှာ ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေ အားလုံးက ယုတ်လျော့သွားတယ်။ "တပ်မတော် အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည် အင်အားရှိမည်" ဆိုတဲ့ဟာကို ကျနော်က လက်မခံပါဘူး။ ကျနော်က "တိုင်းပြည် အင်အားရှိမှ တပ်မတော် အင်အားရှိမည်" ဆိုတာကိုပဲ လက်ခံပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ တိုင်းပြည် အင်အားယုတ်လျော့စေတဲ့ ဒီကိစ္စကို ကျနော် လုံးဝ လက်မခံတာပါ။ ဒီ နျူးကလီးယား စီမံကိန်းဆိုတာ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်အတွက် လုံးဝ မလိုအပ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ မလိုအပ်တဲ့ ကိစ္စဆိုတာ သူတို့ရဲ့ paranoia ပေါ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြောက်နေတာ၊ တစ်တီတူး ခြေထောက်မိုးပေါ်ထောင်ပြီး အိပ်သလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆိုလိုတဲ့ သဘောက ဒီဥစ္စာကြီးက ပြည် သူ့ဘဏ္ဍာငွေတွေ ဖြုန်းတီးနေယုံတင်မကဘဲ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေရဲ့ ဘ၀တွေကိုပါ ဖြုန်းတီးပစ်နေတယ်။ လူ အရင်းအမြစ်၊ ပစ္စည်းအရင်းအ မြစ်မရှိဘဲနဲ့ technology အရင်းအမြစ်မရှိဘဲနဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စကို နိုင်ငံတကာနဲ့လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံပြီးတော့ လုပ်တာ လည်း မရှိဘူး။ ကျနော် ဒီကိစ္စကို ဖော်ထုတ် ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း အဓိက ကတော့ ဒီ မအောင်မြင်နိုင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် မရှိတဲ့ "ရူးနှမ်းနှမ်း စီမံ ကိန်းကြီး"ကို ကျနော်က ဖျက်ချင်တာ၊ ဒီစီမံကိန်းကြီးကို ကျနော်က ရပ်တန်းက ရပ်စေချင်တဲ့ သဘောနဲ့ လုပ်တာပါ။ တပ်မတော်သားတွေ အနေနဲ့ သစ္စာစောင့်သိခြင်းမှာ အတွေးအခေါ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး သစ္စာစောင့်သိတာက ပိုပြီး တော့ကောင်းမယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ တပ်မတော်သား တွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ ခါးပုံစကိုဆွဲပြီးတော့ သစ္စာဆိုလာကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတော်အလံကို ကိုင်ပြီးတော့ သစ္စာဆိုလာကြ တာပါ။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ နျူကလီးယားလက်နက်တွေ လျှို့ဝှက်ထုတ်လုပ်ဖို့ စီမံကိန်း တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား တစ်ချို့ကို ယူဆောင်ပြီး ပြည်ပကို ထွက်ခွါလာသူ ဗိုလ်မှူးဟောင်း စိုင်းသိန်းဝင်းရဲ့ ပြောစကား စတုတ္ထပိုင်း၊ နောက်ဆုံးပိုင်းကို တင်ဆက် ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျနော် ရော်နီညိမ်းပါ။
Posted by နော်မန် at 11:32 PM
photo by - http://www.prayforburma.org
မကြာမီကထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သော ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေး အမြင်ဖလှယ်ကြဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ ယင်းအမိန့်ပြန်တမ်း၏ လက်ငင်းရလဒ်မှာ ဆန့်ကျင်ဖက် သဘောထားနှစ်ရပ်ကို သက်ရောက်မှုရှိနေပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အာဏာလက်ရှိ စစ်အစိုးရကဲ့သို့ပင် နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် စစ်တပ်ဦးစီး အရပ်သားအစိုးရသည်လည်း ပြည်သူလူထု၏ လှိုက်လှဲသော ထောက်ခံမှုရရှိရန် မလွယ်ကူသေးပါ။ ထို့အပြင် တပ်မတော်သားများ၏ ထောက်ခံမှု အပြည့်အဝရရှိဖို့ပင် ခဲယဉ်းနေပါသည်။ စစ်ခေါင်းဆောင်များသည် တပ်မတော်သားများအား အမိန့်ဖြင့်တမျိုး နှစ်သိမ့်ချော့မြူခြင်းဖြင့်တသွယ် အမျိုးမျိုး စည်းရုံး ချုပ်ကိုင် တတ်ပါသည်။
ယခုလိုအချိန်မျိုးတွင် စစ်တပ်ကို အပိတ်သဘောမျိုး ကိုင်တွယ်လျှင် တပ်တွင်းအုံကြွမှု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ သည်ထက်ပို၍ ပြည်သူလူထုနှင့် တပ်မတော်သားများ ပူးပေါင်းသွားလျှင် သူတို့အာဏာမြဲဖို့အတွက် အခက်ကြုံနိုင်သည်။ သည်အလားအလာကို စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများက နောကျေပြီးသားဖြစ်သည်။
ယခုကိစ္စမှာ စစ်မှုထမ်းများကို ထွက်ပေါက်ပေးသလိုလိုနှင့် တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူအကြား ဒင်္ဂါးပြား တခုကို ဒေါင်လိုက် ချပြလိုက်သည်။ တဖက်ကခေါင်း တဖက်ကပန်း အပြန်အလှန်ဇာတ်လမ်းတွေ ရှုပ်သွားအောင် တမင်ဖန်တီးလိုက်ဟန်ရှိသည်။
သို့ဖြင့် တပ်မတော်သားများနှင့် ပြည်သူလူထုအတွင်း ဝိဝါဒ ကွဲလွဲနိုင်သော ဤအမိန့်ပြန်တမ်းကို အချိန်မီထုတ် ပြန်ထားပုံရသည်။ ဤအမိန့်ပြန်တမ်း၏ နောက်ကွယ်ပါ ရည်ရွယ်ချက်ကို ထိထိမိမိအဖြေရှာကြဖို့ လိုမည်ထင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် တပ်မတော်သားများ၏ အသံများများ ထုတ်သင့်သည်။
ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆိုသည့် စကားရပ်မှာ ယေဘူယျဆန်လွန်းသောအဓိပ္ပါယ်ကိုဆောင်၍ ရုပ်ပြကောင်းသည်။ အပေါ်ယံကြောတွေးလျှင် ဤစကားရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော် နှင့်ပြည်သူအကြား အမြင်ကွဲလွဲမှု အလွယ်တကူ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေမှာ အာဏာ လက်မလွှတ်ချင်သော စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အကြိုက်ဖြစ်သည်။
စစ်မှုထမ်းများဖက်မှ ကြည့်လျှင် စစ်တပ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ရလိုသူ အများစုရှိနေပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် စစ်တပ်အင်အား တိုးတက်ရေးကို ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးနိုင်မည့် အဆိုပါဥပဒေအား လက်ခံကြိုဆိုစရာ ဖြစ်နေပါသည်။ အခြားတဖက်တွင်မူ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ရွံရှာမုန်းတီးနေရာမှ စစ်မှုထမ်းဘဝကိုပင် ခါးခါးသည်းသည်း စက်ဆုပ်နေပုံရသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဤကိစ္စဆွေးနွေးရာတွင် နှစ်ဖက်အင်အားစုများ၏ သဘောဆန္ဒအသီးသီးကို အခြေခံနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင် ပြည်သူလူထုဖက်မှ လက်ရှိတပ်မတော်သားများ၏ဘဝကို ကိုယ်ချင်းစာနာသော်လည်း အာဏာဖြင့် ဖိနှိပ်မှု ယန္တရားကြီးထွားသည်ထက် ကြီးထွားလာမှာကို မလိုလားကြောင်း ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြ ဆွေးနွေး သင့်ပါသည်။ ထို့ပြင် တပ်မတော်ပြိုကွဲရေးကို ဦးမတည်သင့် (ပြိုကွဲမည်လည်းမဟုတ်၊ အကယ်၍ တပ်မတော်ပြို ကွဲခဲ့သည်ရှိသော် တိုင်းပြည်အခြေအနေမှာ ယခုထက် အဆများစွာ ဆိုးရွားသွားဖို့ရှိသည်)။ တပ်မတော်အတွင်း ခေါင်းဆောင်မှု ပြောင်းလဲရေးကိုသာ ရှေးရှု သင့်ပါသည်။ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် တပ်မတော်သားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြု မြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိမြန်မာပြည်၏ စစ်ဖက်အရပ်ဖက်ဆက်ဆံရေး အခြေအနေမှာ ငါးခုံးမတကောင်ကြောင့် တလှေလုံးပုပ် ဟုဆိုပြီး နှာခေါင်းရှုံ့နေရုံဖြင့် မပြီးပါ။ အားလုံးက တာဝန်သိသိဖြင့် ပုပ်နေသောငါးများကို ရွေးဖယ်ထုတ်လိုက်လျှင် ငါးကောင်း ငါးသန့်များသာ ကျန်ရှိပါမည်။ ထိုသို့လုပ် ဆောင်ရန် ပြည်သူများနှင့် တပ်မတော်သားများ ညီညွှတ်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။
တပ်မတော်သားများဖက်မှလည်း ပြည်သူလူထုကို အကာအကွယ်ပေးသော တပ်မတော်၊ ပြည်သူလူထုကို အလုပ်အကျွေးပြုသော တပ်မတော်၊ ပြည်သူချစ်သော တပ်မတော် တရပ်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မှသာ ပြည်သူလူထုက တပ်မတော်ကို အားပေးဝန်းရံ ကူညီလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိချပ် စေချင်ပါသည်။
အထက်အမိန့်ကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာနေရုံမျှဖြင့် ပြည်သူချစ်သော တပ်မတော် ဖြစ်မလာပါ။ ပြည်သူလူထုနှင့် အေးအတူပူအမျှ အတူရှိနေမှသာလျှင် မလိုလားအပ်သော အထက်အရာရှိဆိုးများ၏ ဦးဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါမည်။
ဒီနေ့မြန်မာပြည်တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကြီးဆိုးနေမှုကြောင့် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးကာ ပြည်သူ လူထုအများစု ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး ပြည်သူအကြားမှာ တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းနေရသည်ကို ပြောစရာပင်လိုမည် မထင်ပါ။
တော်လှန်ရေးနေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားများတွင် ယခင်ကကဲ့သို့ ပြည်သူလူထု လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပါဝင်မှု မရှိတော့ခြင်း၊ ရှေ့တန်းပြန်တပ်မတော်သားများအား ပြည်သူလူထုက သောင်းသောင်းဖြဖြ နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုမှု မရှိတော့ခြင်းတို့က သက်သေခံနေပါသည်။ တပ်မတော်သားများကိုယ်တိုင် မိမိတို့၏ လုပ်ရပ်များသည် ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက် ဟုတ်ပါသလား၊ မိမိတို့အသက်အသေခံ တိုက်နေရသူများသည် ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ဖျက်ဆီးနေသူများ ဟုတ်မှန်ပါသလား၊ တိုက်ပွဲဖြစ်ရာဒေသရှိ ပြည်သူလူထုက မိမိတို့အပေါ် အားကိုးယုံကြည်မှုဖြင့် ဆက်ဆံပါသလား၊ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုဖြင့် တုန့်ပြန်ပါသလား၊ မိမိတို့စားသုံးသော ရိက္ခာကို မည်သူတို့က စိုက်ပျိုး ထောက်ပံ့ပေးပါသနည်း၊ မိမိတို့ရရှိသော လစာငွေကို ဘယ်က ရသနည်း။ မျက်စိတမှိတ် စဉ်းစားကြည့်လျှင်ပင် တိတိကျကျ အဖြေပေါ်နိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ အခြေအနေများအောက်တွင် အဓိပ္ပါယ်ထွေပြားပြီး အကဲဆတ်လှသော ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ အမိန့်ပြန်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြရာ၌ ဘက်တဖက်စီ၏ အမြင်များကို အလေးကဲ ဆွေးနွေးနေပါလျှင် ကွဲလွဲမှုများသာ ရှေ့တန်းရောက်လာပြီး အာဏာရှင်ကြီးများ အလိုကျအတိုင်း တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ ကြည်ဖြူလက်တွဲနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ အလှမ်းဝေးနေဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုချိန်ခါသည် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်နေချိန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် စစ်မှုထမ်းခြင်း၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ (တိုင်းပြည်၏ လိုအပ်ချက်လော၊ အာဏာ ချုပ်ကိုင်ထားသူများ၏ လိုအပ်ချက်လော) စသည်ဖြင့် သေချာဂဏစွာ စဉ်းစားဝေဖန်သုံးသပ်၍ ဆွေးနွေးအဖြေ ရှာကြပါရန် တိုက်တွန်းအကြံပြု တင်ပြအပ်ပါသည်။
အာဏာရှင်၏ လှည့်စားမှုညွှတ်ကွင်းမှ ရုန်းထွက်လွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေ။
Posted by နော်မန် at 11:07 PM
မြန်မာ ၁၁ ဦးပါတဲ့ တောင်ကိုရီယားသင်္ဘောကို ဆိုမားလီးယားပင်လယ်ဓါးမြ ပြန်ပေးဆွဲ
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာ စနေနေ့က ဆိုမာလီးယား ပင်လယ်ဓါးမြတွေ ပြန်ပေးဆွဲခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယား ကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာ မြန်မာသင်္ဘောသား ၁၁ ဦး အပါအ၀င် သင်္ဘောသား ၂၁ ဦး ရှိနေတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား ၈ဦး၊ အင်ဒိုနီးရှား ၂ ဦးနဲ့ မြန်မာ ၁၁ ဦးပါဝင်တဲ့ တန်ချိန် တသောင်းရှိတဲ့ ကုန်သင်္ဘောဟာ ဓါတုပစ္စည်းတွေ တင်ဆောင်လာတဲ့ Samho Shipping ကုမ္ပဏီပိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီဟာ တောင်ကိုရီးယားတောင်ပိုင်း Busan ဆိပ်ကမ်းမှာ အခြေစိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။
ဒီသင်္ဘောဟာ United Arab Emirates ခေါ် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုကနေ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုအသွား အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာ ပင်လယ်ဓါးမြတွေက ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘော အခုဘယ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျ မသိရသေးပေမဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှပါသွားသူတွေ ထိခိုက်မှု တစုံတရာရှိပုံမရဘူးလို့ အရာရှိတဦးရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး တောင်ကိုရီးယား Yonhap သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆိုမားလီးယား ပင်လယ်ဓါးမြတွေဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကနေ အခုထိ သင်္ဘော ၇ စင်းကို ပြန်ပေး ဆွဲခဲ့ကြပြီး ဒီအထဲမှာ အများစုဟာ အိုမန် (Oman) ကမ်းလွန်ဒေသမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတာပါ။
အခုသင်္ဘော ပြန်ပေးဆွဲမှုကနေ ဆိုမားလီးယား ပင်လယ်ဓါးမြတွေ ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ သင်္ဘော စုစုပေါင်း ၃၁စင်း ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဓါးစာခံပေါင်း ၆၅၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂ ရေတပ်က ပြောပါတယ်။
Posted by နော်မန် at 11:01 PM
ပျဉ်မနားမြို့အနီး နေအိမ်တွေ နေပြည်တော်က အဓမ္မဖျက်သိမ်း
ပျဉ်မနားမြို့အနီး ဆိပ်နံတုန်းရွာက အိမ်တွေကို နေပြည်တော် စစ်တပ်၊ ရဲနဲ့ စည်ပင်သာယာအဖွဲ့က အဓမ္မ လိုက်လံဖျက်သိမ်းနေတာ အိမ်ခြေ ၁ ထောင် လောက် ရှိ်နေပြီလို့ RFA က စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
ဆိပ်နံတုန်းရွာဟာ ပျဉ်းမနား အနောက်ဘက် ၂ မိုင်ကျော်ကျော်သာ ဝေးတဲ့ ပြန်ကပြေးရွာနဲ့ ငလိုက်ချောင်းပဲ ခြားပြီး အိမ်ခြေ ၂ ထောင်လောက်ရှိတဲ့ ရွာကြီးတရွာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆိပ်နံတုန်းရွာက အိမ်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ လေးရက် ဇန်နဝါရီလ ၁ဝ ရက်နေ့က စပြီး ဒီကနေ့အထိ လိုက်ဖျက်နေတာလို့ ဒေသခံ ရွာသားတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။
အခု အိမ်တွေဖျက်နေတဲ့ နေပြည်တော်စစ်တပ်၊ ရဲနဲ့ စည်ပင်အဖွဲ့ဟာ အခုလို ဖျက်သိမ်းမယ့်အကြောင်း ပြည်သူကို ကြိုတင် မပြောသလို နေစရာ အစားထိုး ပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ် မတွေ့ရတဲ့အတွက် ကလေး၊ လူကြီး ရာနဲ့ချီပြီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝ ရောက်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီ အိမ်ဖျက်အဖွဲ့ဟာ ဒေသခံ ပြည်သူတွေအပေါ် မောက်မောက်မာမာ ဆက်ဆံတာ၊ လက်လွတ်စပယ် ဥပဒေမဲ့ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးတာတွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့အတွက်လည်း ဒေသခံတွေက ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်အစိုးရရဲ့ နေပြည်တော်သာယာရေး စီမံကိန်းတရပ်အဖြစ် ငလိုက်ချောင်းကို ချဲ့ထွင်ပြီး သင်္ဘော သွားလာနိုင်တဲ့အထိ တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်နေသလို အဲဒီ စီမံကိန်းအတွက် ချောင်းထဲမှာ စက်ပစ္စည်းတွေ ရောက်နေတာ တွေ့ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဆိပ်နံတုန်းရွာက အိမ်တွေ ဖျက်ပြီးရင် အဲဒီရွာနဲ့ ချောင်းသာ ခြားတဲ့ ပြန်ကပြေးရွာ ဘက်ကို ရောက်လာဦးမှာလား ဆိုပြီး ပြန်ကပြေးရွာသားတွေလည်း စိုးရိမ် ထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by နော်မန် at 10:56 PM
Burma Chronology Of Events (December,2010)
Posted by နော်မန် at 4:02 AM
ပါလီမန်အရေခြုံ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဟု ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ပြော
မကြာမီ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါ်ထွန်းလာမည့် အစိုးရသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ “က” ကြိုးအတိုင်း “က” ရမည့် ပါလီ မန် အရေခြုံ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်သံခဲက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ယနေ့ ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်သံခဲ (ဓါတ်ပုံ- www.apfnews.com)
“လာမဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲမှာ ပေါ်လာမဲ့ အစိုးရသစ်ဟာ ပါလီမန်မျက်နှာဖုံးစွပ်ရင်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကကြိုးအတိုင်း ကရမဲ့ အစိုးရတစ်ခုဖြစ်တယ် ဗီဇစရိုက်ကတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပဲ ” ဟု သူက ပြောသည်။
၄င်းအစိုးရသစ် ပေါ်လာရုံဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဆုံးရူံးနေသည့် လွတ်လပ်မှု ၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆိုသည့် အရာများ ရရှိမည်ဟု မယုံကြည်ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ နှစ်သစ်တစ်နှစ်ရောက်တိုင်း ဆုတောင်းရုံ နုတ်ခွန်းဆက်ရုံဆိုတဲ့ အခြေအနေကနေ မလွတ်မြောက်သေးဘူး၊ ၂၂ နှစ်ကြာ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးသမိုင်းထဲမှာ အလုပ်မဖြစ်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်။
ဒီနေ့ ၂၀၁၁ ထဲမှာ ခွန်အားသစ်မွေးပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့ အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အတွက် ဆက်လက် ချီတက်ရအုံးမှာပဲ” ဟု သူ့အမြင်ကို ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ခေါ်) ABSDF (ဓါတ်ပုံ-www.imagestate.com)
ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က နအဖ ထုတ်ပြန်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေအပေါ် ABSDF အဖွဲ့က ကန့်ကွက်သည့် ကြေငြာချက်ကို ယနေ့ထုတ်ပြန်မည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်သည် တပ်မတော်တစ်ခုတည်းနှင့် ဆိုင်သည့် အရာမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ဘ၀နှင့် တိုက်ရိုက် ပတ်သက်သဖြင့် လွတ်တော်အတွင်း ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရုံဖြင့် မလုံလောက်ကြောင်း ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူဖို့ လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဥပဒေသည် နအဖ၏ စစ်တပ်ဗဟိုပြု စဉ်းစားချက်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို မဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ပြည်တွင်း စစ်ကာလ နိုင်ငံမတည်ငြိမ်သည့်ကာလတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးကို အပြင်းအထန် ထိခိုက်စေနိုင်သဖြင့် ကန့်ကွက်သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ခေါ်) ABSDF သည် နအဖစစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့် ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
source by : http://www.mongloi.org
Posted by နော်မန် at 3:25 AM
ဘန်ကောက်ပို့စ်က ပြန်ပေးသတင်းကို ဒီကေဘီအေ ဘက်က တုံ့ပြန်
ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့မှ ထိုင်းရွာသားတဦးကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး ဘတ်သုံးသိန်း တောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတပုဒ်ကို ဘန်ကောက်ပို့စ် အွန်လိုင်းမှာ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ ဒီကနေ့မှာ ဖေါ်ပြထားတာတွေ့ရှိရပြီး အဲဒီသတင်းကိုပဲ လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ အာအက်ဖ်အေ မြန်မာပိုင်းကလည်း ဒီမနက်မှာ ထပ်မံကိုးကားပြီး ရေဒီယိုမှာ တင်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီကေဘီအေ ကို ပြန်ပေးဆွဲ ငွေတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဖေါ်ပြချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီအေဘီအေ တပ်မဟာ ၅ မှ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ဆန်းအောင် က အခုလို တုံ့ပြန် ပြောဆိုပါတယ် ….
“ဒီလိုမျိုးသတင်းထွက်လာတာဟာ ကျနော်တို့ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ တခုခုဖြစ်စေချင်တဲ့ သဘောထားတွေ တွေ့ရတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဒီငွေသုံးသိန်းလောက်နဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသိက္ခာ ပွန်းပဲ့အောင် ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး။
အခု ပြန်ပေးဆွဲမှုဖြစ်တဲ့ နေရာမှာလဲ ကျနော်တို့တပ်တွေ အဖွဲ့ဝင်တွေ မရှိကြပါဘူး။ ကျနော်တို့ စုံစမ်းကြား သိရသလောက်ကတော့ သူတို့ ထိုင်းလူမျိုးချင်း ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကို ကျနော်တို့ အဖွဲ့နာမည် ယူသုံးလိုက်တာလို့ ကြားရတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ဘက်က လုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီသတင်းကို ဖေါ်ပြတဲ့ သတင်းဌာန နဲ့ သတင်းရေးတဲ့ သူကိုပါ ဖုန်းနဲ့ကော အီးမေးနဲ့ပါ ဆက်သွယ်ပြီး ပြောပြ ထားပါတယ်”
၁၅ နှစ်ကျော်ကြာ နအဖနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်ထားရာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တဲ့နေမှာပဲ နအဖ နဲ့ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး ဦးဆောင်တဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ တိုက်ပွဲတွေ ပြည်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က စလို့ ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးကို ဆုငွေထုတ် ဖမ်းခိုင်းတာတွေ၊ ထိုင်းဘက်က သူ့ကို မဖမ်းပေးရင် မဲဆောက် မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးဂိတ် ပြန်မဖွင့်ပေးဘူးဆိုတာတွေ စတဲ့ အတည်ပြုလို့မရတဲ့ သတင်းတွေလည်း မကြာခဏ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိပါတယ်။
(မူရင်း သတင်း အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ မြန်မာဘာသာပြန်ကို တဆက်တည်း ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။)
Karen rebels hold Thai man hostage
Published: 12/01/2011 at 12:00 AM
TAK : The Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) has takenaThai man hostage in Burma territory and is demandinga300,000 baht ransom, police say.
The man, identified as only Kriangsak, was being held opposite Tak’s Umphang district, they said. Mr Kriangsak isaresident of Taperpoo village in tambon Mokro of Umphang district.
The police said yesterday Mr Kriangsak crossed the border into Burma to negotiateafinancial matter withagroup from the DKBA. However, he failed to reach an agreement and the DKBA took him hostage and demanded 300,000 baht in cash in exchange for his freedom.
The DKBA claimed Mr Kriangsak owed them this amount.
Tak governor Samat Loifa has assigned Umphang district chief Chawengsak Jaikham to contact the DKBA about Mr Kriangsak’s welfare. It has yet to respond.
Yesterday,aspecial task force of the 4th Infantry Division in Mae Sot district watched an armed confrontation between the DKBA and the Burmese military near Manao island opposite Mae Konken village in tambon Mahawan.
A number of K-81 grenades exploded in Thai territory,aspecial task force source said.
The source said Thai members of the Thai-Burmese Border Committee (TBC) sentamemo to their Burmese counterparts in Myawaddy asking them to seek assurances from the Burmese military that explosive projectiles were not fired into Thailand.
A group of Burmese soldiers has been surrounded by DKBA militants. The source saidalot of Burmese troops had been killed or injured.
(ဘန်ကောက်ပို့စ်က မူရင်းသတင်းကို မြန်မာဘာသာပြန်)
ဒီကေဘီအေက ထိုင်းတယောက်ကို ဓားစာခံဖမ်းထား
ဇန်န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၁ (ဘန်ကောက်ပို့စ်)
တာ့ခ်။ ။ ဒီကေဘီအေက မြန်မာနယ်ထဲမှာ ထိုင်းအမျိုးသားတဦးကို ဓားစာခံဖမ်းထားပြီး ဘတ်ငွေ ၃ သိန်းတောင်း တယ်လို့ ရဲက ပြောပါတယ်။ ခရိုင်ယန်ဆတ်လို့ သာသိတဲ့ လူတဦးကို တာ့ခ်ပြည်နယ်၊ အုန်းဖန်ခရိုင်ရဲ့တဖက်ကမ်းမှာ ပြန်ပေးဆွဲထားတယ်လို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။ ခရိုင်ယန်ဆတ်ဟာ အုန်းဖန်ခရိုင်၊ မိုခရို တိုက်နယ်က ထာ့ပါပူး ရွာသား တဦးဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာ ခရိုင်ယန်ဆတ်ဟာ တနေ့က ဒီကေဘီအေ အဖွဲ့တဖွဲ့နဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စတွေ ညှိနှိုင်းဖို့ နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး မြန်မာပြည်ထဲကို ၀င်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကေဘီအေနဲ့ သဘောတူညီချက် မရတာကြောင့် ဒီကေဘီအေက သူ့ကို ဓားစာခံအဖြစ်ဖမ်းထားပြီး ဘတ်ငွေ ၃ သိန်းနဲ့ ပြန်ရွေးဖို့ တောင်းတာဖြစ်တယ်လို့ ရဲက ပြောပါ တယ်။ ခရိုင်ယန်ဆတ်က ဒီငွေကို ပေးခဲ့တယ်လို့ ဒီကေဘီအေက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။
တာ့ခ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆမတ်လွိုင်ဖက ခရိုင်ယန်ဆတ်ကိစ္စအတွက် ဒီကေဘီအေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ အုန်းဖန်ခရိုင်မှူးချာ ၀င်ဆတ်ကို လွှတ်ထားပါတယ်။ မဲဆောက်ခရိုင် အထူးတပ်ဖွဲ့၊ တပ်ရင်း (၄) က မဟ၀မ်တိုက်နယ်၊ မယ့်ခွန်ကင်ရွာ တဖက်မှာရှိတဲ့ မနောက်ကျွန်းအနီး ဒီကေဘီအေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်အကြား လက်နက်ကိုင် ထိပ်တိုက်တွေ့နေတာကို တနေ့က စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ထိုင်းမြေပေါ်မှာ K-81 လက်ပစ်ဗုံးသီးတွေ ကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ အထူးတပ်ဖွဲ့သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါတယ်။ ပေါက်ကွဲတဲ့ ကျည်ဖူးတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ပစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ဆီက အာမခံချက်ကို တောင်းဆိုထားတဲ့ မှတ်တမ်းကို ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကော်မတီရဲ့ ထိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေက မြ၀တီမှာရှိတဲ့ မြန်မာဖက်က ကော်မတီဝင်တွေကို ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကေဘီအေ စစ်သွေးကြွတွေက မြန်မာစစ်သား တဖွဲ့ကို ၀ိုင်းထားတယ်။ မြန်မာစစ်သားတွေ အများအပြားသေကြေ၊ ဒဏ်ရာရတယ်လို့ သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါတယ်။
Posted by နော်မန် at 12:48 PM
ဖလူးစစ်ဒေသမှာ နအဖ အသုံးပြုတဲ့ အကျဉ်းသား အထမ်းသမား၊ လူသား မိုင်းရှင်းကရိယာ(ရုပ်သံ)
source by : http://www.youtube.com/user/FreeBurmaProject
Posted by နော်မန် at 10:19 AM
နအဖ ရဲ့ ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပဒေ
source by : http://www.scribd.com/niknayman
Posted by နော်မန် at 4:22 AM
နအဖ က အရံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အားများ စုစည်းနေခြင်း
source by :http://www.absdf8888.org
Posted by နော်မန် at 3:43 AM
ကားခ တိုးမြှင့်မှုကြောင့် ကလေးမြို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြ
ကျောင်းကားခ တိုးမြှင့်မှုကို လက်မခံနိုင်၍ ကလေးမြို့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက် ဆန္ဒပြနေကြစဉ်။ ဇန်န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၁။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့နယ်တွင်းက ကလေးတက္ကသိုလ်၊ စက်မှုတက္ကသိုလ်(ကလေး) နဲ့ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်တွေက ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၁,၀၀၀ ကျော်ဟာ ကျောင်းကားခ တိုးမြှင့်ကောက်ခံတာကို လက်မခံနိုင်လို့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြမှု တခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မနက် ၇ နာရီကျော်ကနေ နေ့လယ် ၂ နာရီကျော်ထိ ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး တောင်းဆိုချက်တွေကို နောက်ဆုံးမှာ အာဏာပိုင်တွေက လိုက်လျောလိုက်တယ်လို့ ကြေညာတဲ့အခါ လူစုခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် မအေးအေးမာက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မကုန်ခင်ကတည်းက ဒေသကွပ်ကဲရေး စစ်ဌာနချုပ် (ဒကစ) ကလေးက အာဏာပိုင်တွေဟာ ဒေသတွင်း တက္ကသိုလ်တွေက တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်တွေကို ခေါ်ယူပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကစပြီး ကျောင်းကြိုပို့ ကားခများကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားမှုတွေကို လုပ်ခဲ့ရာမှာ ပါမောက္ခချုပ်တွေက ကျောင်းသားတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို တင်ပြခဲ့ပေမဲ့ အာဏာပိုင်တွေက ဂရုမစိုက် လျစ်လျူရှုခဲ့ရာကနေ ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ကလေးမြို့မှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၁,၀၀၀ ကျော် ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရတာပါ။
ကျောင်းကားခ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုကို လျှော့ချပေးဖို့ အပါအ၀င် တောင်းဆိုချက်တွေကို လိုက်လျောစေဖို့အတွက် ကျောင်းသားတွေ စီတန်း ချီတက်ကြပုံကို မြို့ခံတဦးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ကျောင်းကြိုပို့ကားတွေကို အတက်နဲ့ အဆင်း အားလုံးကို တားပြီးတော့ လမ်းပိတ်ရပ်ပြီး ကားတွေလည်း မသွားခိုင်းတော့ဘူး။ ကျောင်းသားတွေ ဘူတာလမ်းခွဲကနေ ထောင်နဲ့ချီ ချီတက်လာမယ်ဆိုတာ စစ်တပ်က သတင်းရပြီးသား။ စစ်တပ်ကလည်း သတင်းကြိုရတော့ အဲဒီဒကစရှေ့မှာ တားပြီးတော့ အဆင်သင့် စောင့်နေတာပါ။”
ကလေးမြို့ တာဟန်းရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်ကနေ စုဝေးပြီး ဒေသကွပ်ကဲရေး စစ်ဌာနချုပ်ရုံးကို ကျောင်းသားတွေ ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ အ၀ါရောင်လိုင်းနဲ့ အနီရောင်လိုင်းတွေကို တားဆီးပြီး စစ်သားတွေက ကာဆီးထားခဲ့ပါတယ်။ အ၀ါရောင်လိုင်းနဲ့ အနီရောင်လိုင်းတွေကတော့ ထပ်ပြီး ရှေ့ဆက်မတိုးဖို့ သတိပေး တားမြစ်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်က ဒကစမှူးနဲ့ ဒုတိယ တာဝန်ရှိသူတွေ ခရီးထွက်နေတာမို့ သူတို့လက်အောက်က ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်ရှိသူ အရာရှိတဦးက ဦးဆောင်ပြီး ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျောင်းသားတွေက စစ်တပ်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ အချိန်မှာ ကျောင်းသားတွေက ပြောတယ်၊ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေက စားဝတ်နေရေးလည်း ခက်ခဲတယ်၊ အခု ကားခတွေက နောက်တဆတက်တော့ တနေ့ကို ၄၀၀ ကုန်တယ်၊ ထမင်းစားစရာတောင် မရှိတော့ဘူး၊ အရင်တုန်းကလည်း ငတ်နေတာ၊ အခု ကားခတက်တော့ ကားခတောင် ပေးစရာ မရှိဘူး၊ ကျနော်တို့မှာ အားကိုးပြီး တောင်းဆိုစရာဆိုလို့ ဒကစမှူးပဲရှိတယ် ဆိုပြီး သွားပြောတာပါ။ ဒကစမှူးရဲ့ စကား ပြန်တုံ့ပြန်တာ မကြားရဘဲ မပြန်ဘူးလို့ အဲဒီလိုမျိုး သူတို့ ပြောတာပါ။”
ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားတွေဟာ စစ်သားတွေ တန်းစီရပ်ထားတဲ့ နေရာထိ ချီတက်ခဲ့ကြပေမဲ့ စစ်တပ်ကတော့ လက်နက်မကိုင်ဘဲ တားဆီးမှုကို လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စစ်တပ်ဘက်က ပထမဦးဆုံး ကျောင်းသားတွေကို ပြောတာကတော့ ဘယ်သူက ဦးဆောင်ပြီး ဒီလို ဆန္ဒပြမှုကို လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ ကျောင်းသားတွေကတော့ အားလုံး ဦးဆောင်တယ်၊ အားလုံး မိမိဆန္ဒနဲ့ လာကြတယ်လို့ ဖြေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁။ ကားခကို ကျပ် ၂၀၀ ကောက်ခံနေတာ အရင်နှုန်းထားအတိုင်း ကျပ် ၁၀၀ ကို ပြန်လည်လျှော့ချပေးဖို့၊
၂။ ကျောင်းသားဦးရေနဲ့အညီ ကျောင်းကား လုံလောက်စွာ စီစဉ်ပေးဖို့၊
၃။ ကျောင်းကားတွေကို အချိန်မှန် ပြေးဆွဲပေးဖို့၊
၄။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းကားတွေမှာ ခရီးသည်နဲ့ ကုန်စည်တွေ တင်ဆောင်ခွင့် မပြုဖို့ စတာတွေ တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ အာဏာပိုင်တွေဘက်က လိုက်လျောခဲ့ရပုံကိုလည်း အခုလို ပြောပါတယ်။
“သူတို့က ကျောင်းသားတွေ တင်ပြချက်ကို လက်ခံတယ်၊ အထက်ကို တင်ပြပေးမယ်၊ ခဏ စောင့်ဆိုင်းကြပါ ဆိုတော့ ကျောင်းသားတွေက အဲဒီနားမှာရှိတဲ့ အောင်ဆန်း ဘောလုံးကွင်းနားက လမ်းဘေးမှာ အားလုံး ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ ထိုင်စောင့်နေကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခချုပ်တွေ၊ ကထိကတွေ၊ ဌာနမှူးတွေ ရောက်လာပြီး ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်။ စစ်တပ်ဘက်က အရာရှိတွေကလည်း အထက်ကို တင်ပြပြီး အဲဒီမှာ ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ကြတယ်။
“အာဏာပိုင်တွေဘက်က ကျောင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက် ၄ ချက်ကို လက်ခံတယ်လို့ အကြောင်းပြန်တဲ့ ဟာကို ကလေး ၀ိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခချုပ်ကို ပြောခိုင်းတယ်။
၀ိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခချုပ် ပြောတာက ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက် အားလုံးဟာ မှန်ကန်ပါတယ်၊ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာတို့က ဖြစ်ဖြစ်၊ လူကြီးပိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံပြီး သဘောတူပါတယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ ကျောင်းသားအားလုံး ၀မ်းသာ ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ လက်ခုပ်တွေတီးပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။”
ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားတွေဟာ အစပိုင်းမှာ လူဦးရေ ၇၀၀ ကျော်လောက် ရှိပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာ လူဦးရေ ၁,၀၀၀ ကျော်ထိ ဖြစ်သွားပြီး ကျောင်းသားထက် ကျောင်းသူဦးရေက ပိုများတယ်လို့ မြို့ခံတွေက ဆိုပါတယ်။ ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားတွေရဲ့ နောက်ဆုံး တောင်းဆိုချက် တခုကတော့ သူတို့ ဆန္ဒပြတဲ့အတွက် ဘယ်ကျောင်းသားကိုမှ ကျောင်းကနေ ထုတ်ပယ်တာ၊ အရေးယူတာ မလုပ်ဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အလားတူ ပြဿနာမျိုးတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသလို နယ်ကျောင်း အတော်များများမှာ ကြုံတွေ့နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှုမထမ်း မနေရ အမိန့်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းက နအဖက အမိန့် ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းမှာ လူငယ်တွေကို ဆင့်ခေါ်ကာ စစ်မှုထမ်းဖို့ စည်းရုံး ပြောဆိုတာတွေ၊ ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုတာ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တရားမဝင် မထုတ်ပြန်ပေမယ့် အရပ်ထဲမှာ စည်းရုံးပြောဆိုတာတွေ ရှိ
ဧရာဝတီတိုင်း ငပြေမကျေးရွာအုပ်စု နဲ့ ပေါင်းတည်ကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ ရာအိမ်မှုး ဆယ်အိမ်းမှုးတွေက အသက် (၁၈) ကနေ (၄၅) နှစ်အတွင်း လူငယ်တချို့ကို မလာမနေရ ဆင့်ခေါ်ပြီး စစ်မှုထမ်းဖို့ ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း အဲဒီဒေသခံ ရွာသားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အဲဒီဆင့်ခေါ်မှုအတွက် လူငယ်တစ်ရာလောက် တတ်ရောက်ခဲ့ပြီး အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ စစ်မှုထမ်းဖို့ အမိန့်နဲ့ ပြောဆိုတာထက် စစ်သားစုစောင်းတဲ့ ပုံစံမျိုး တွေ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာတော့ အသက် (၁၈) နှစ်ကနေ (၄၅)နှစ် အတွင်းရှိသူတွေကို စာရင်း စကောက်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆို ဆောင်ရွက်တာမျိုးတော့ မရှိဘူးလို့ ဒေသခံ ကျောင်းသားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
စစ်မှုမထမ်း မနေရ ဆိုတဲ့သတင်းဟာ ပြန့်နှံ့နေပေမယ့် အစိုးရကနေ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကတဆင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာတာတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
source by : http://www.bbc.co.uk
Posted by နော်မန် at 3:03 AM
လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်တွင် ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်ရှိ ကိုရီးယားပိုင် ဂလိုဘယ်ဟဲ ဆံပင်တုစက်ရုံမှာ အခုလ ၇ ရက်နဲ့ ၈ ရက် နေ့က အလုပ်သမား ၂ဝဝ ခန့် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ လုပ်အားခ နည်းတာ၊ အချိန်ပို ခိုင်းတာနဲ့ ရုံးပိတ်ရက် မရှိတာတွေအပေါ် ဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်လို့ အလုပ်သမားမိသားစုဝင်တဦးက ပြောပါတယ်။
“အချိန်ပိုလည်း ဆင်းရတယ်။ အချိန်ပိုလည်း ည ၁ဝ နာရီအထိ ဆင်းရတယ်။ ဆင်းပြီးတော့ ထမင်း မကျွေးတော့ဘူး။ ထမင်းကျွေးမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီထမင်းဖိုးကို ဖြတ်မယ်။ ကားခ ဖြတ်တာရယ်၊ ဒီထမင်းဖိုး ဖြတ်မယ့်ဟာတွေ မကျေနပ်ဘူး။ နောက်တခါ သူတို့ အစတုန်းက ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင် (ဘောနပ်) ကြေးကို အပြည့်အဝ ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောထားတယ်။ ပြောထားပြီးတော့ လစာ ထုတ်တဲ့အခါကျ ၈ဝ ကျော်မှ (ဘောနပ်) ကြေး ပေးမယ်ဆိုတော့ လစာနဂိုက ခြောက်သောင်းကျော်ရတဲ့ ကလေးတွေက လေးထောင်ကျော်လေးပဲ ရကြတယ်။ ကားခတွေ ဘာတွေ နုတ်ဆိုတော့ အဲ့ဒါတွေကို မကျေနပ်ကြဘူး။ မကျေနပ်တဲ့အတွက် ပထမတခါတုန်းကလည်း ဆန္ဒပြထားတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာ လေဘာရုံးကနေ ဖြေရှင်းပေးတယ်လို့ ပြောကြတယ်။
လေဘာရုံးက ဘာပြောလဲဆိုတော့ လူကြီးတွေက သူတို့ကို လာပြီးတော့ ပြောတယ်တဲ့။ သူတို့ကို မကျေနပ်လို့ရှိရင် ဆန္ဒမပြကြပါနဲ့ လေဘာရုံးကိုတိုင်၊ လေဘာရုံးကနေ အခက်အခဲတွေ ဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ပြောတဲ့အခါကျတော့ ကလေးတွေကလည်း လေဘာရုံးကိုလည်း စာတင်ကြတယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်။
လေဘာရုံးက ဘာမှ မလုပ်ပေးတော့ သူတို့က နေပြည်တော် လေဘာရုံးကိုတခါ စာထပ်တင်တယ်။ တင်တဲ့အခါမှာလည်း ဘာမှ ထူးခြားမှု မရှိဘူး။ မရှိတဲ့အတွက် ကလေးတွေက အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆန္ဒပြတယ်။”
နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် ၁၅ယောက်ကို ဆွေးနွေးဖို့ စက်ရုံမှာ ခေါ်ထားပြီး လူစုခွဲ လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by နော်မန် at 2:38 AM
သိမ်းဆည်းလယ်မြေ လျော်ကြေးရဖို့ လယ်သမား ၃၀၀ ကျော် တောင်းဆို
ရန်ကုန်တိုင်း အရှေ့ပိုင်းခရိုင်က လယ်သိမ်းခံ လယ်သမား အယောက် သုံးရာကျော်ဟာ နစ်နာချက်တွေ ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် တဦးချင်း အတွေ့အကြုံတွေ ရေးသား လက်မှတ်ထိုးပြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှာ တင်ပြလိုက်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လယ်သမားတဦး ကျွဲတရှဉ်းဖြင့် လယ်ထွန်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး တိုင်ကြားခဲ့တဲ့ လယ်သမားတဦးက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်က ခရိုင် အေးချမ်းသာယာရေး ရုံးမှာ၊ လူပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ပါတယ်။ တဦးချင်းရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါ့နော် သူ့ လက်ဗွေ လက်မှတ်နဲ့၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနဲ့ ပူးတွဲပြီးတော့ တင်ပြတာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးမင်းများကလည်း အထက် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အောက်လယ်သမားနဲ့ ပေါ့နော်၊ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။”
လယ် ၅ ဧကနဲ့ ဥယျာဉ် ၃ ဧက အသိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်သမားတဦး ပြောပြခဲ့တာပါ။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့မြို့နယ်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်နဲ့ ဒဂုံတောင်ပိုင်း မြို့နယ်က လယ်တွေကို ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ ရွှေနဂါးမင်းကုမ္ပဏီ ၊ ရွှေဟိန်းထက်၊ အေရှားဝေါနဲ့ ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီတွေက စုစုပေါင်း လယ်ဧက ၁၉၀၀ ကျော် သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီ လယ်တွေကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်က စတင်သိမ်းယူခဲ့ပြီး၊ အဲဒီတုန်းက လယ်သမားတွေကို အချက် ၃ ချက် စီစဉ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးထားတယ်လို့ လယ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီအချက်တွေကတော့ သိမ်းလိုက်တဲ့ လယ်တွေအတွက် ကုမ္ပဏီတွေက တဧက ကျပ် ၅ သောင်း နှုန်း နစ်နာကြေးပေးမယ်၊ နေစရာ မြေကွက်လည်း ပေးမယ်၊ အလားတူ လယ်သမားတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီ အကျိုးတူ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မယ်၊ အစိုးရရဲ့ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကလည်း လျော်ကြေးပေးမယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ လယ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း အပြည့်အဝ မဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက် လယ်သမားတွေ နစ်နာနေလို့ အခုလို စုဝေးတင်ပြကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလယ်သမားတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ကလည်း စီတန်းလမ်းလျှောက်ပြီး ခရိုင်ရုံးမှာ အရေးဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ ကိစ္စကို ILO ကမ္ဘာ့ အလုပ်သမားအဖွဲ့ရဲ့ ရန်ကုန်ရုံးမှာလည်း တင်ပြထားပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူက ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
Posted by နော်မန် at 2:33 AM
တလောကမိတ်ဆွေတဦးနဲ့ စကားပြောဖြစ်ကြရင်း တပ်မတော်သားတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတယ်။ သူက ခု နောက်ပိုင်း စစ်တပ်ထဲရောက်လာတဲ့ ရဲဘော်တွေကြည့်ရတာ စစ်သားနဲ့ သိပ်မတူကြောင်း၊ ပြောတာ ဆိုတာ သွားတာ လာတာ ဆံပင်ညှပ်ထားပုံကအစ အရပ်သားပုံစံမျိုး ပေါက်နေတယ်လို့ ပြောတယ်။
မှန်ပါတယ်။ စစ်တပ်ထဲမှာလည်း ရှေးလူနဲ့နောက်လူ မျိုးဆက်ကွာဟမှု တွေရှိပါတယ်။ မျိုးဆက်မတူတော့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ သမိုင်းကာလတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ ကွာခြားကြသလို တွေးခေါ်ရှုမြင်ပုံတွေလည်း ကွဲပြားကြတာပေါ့။ နောက်ပြီး ရှေ့မျိုးဆက်က နောက်မျိုးဆက်အပေါ် အားမလိုအားမရ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအရိပ် လွှမ်းမိုးမှုတွေလည်း ရှိနိင်ပါတယ်။
သဘာဝအားဖြင့်တော့ မျိုးဆက်သစ်ဆိုတာ မျိုးဆက်ဟောင်းအပေါ်မှာ တည်မှီပြီး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရတာပါ။ သားသမီးကောင်းဖို့ မိဘရဲ့မြော်မြင်ဆင်ခြင်နိုင်မှုက အရေးပါသလို တပည့်ထက်မြက်ဖို့ ဆိုတာကလည်း ဆရာသမားရဲ့ သွန်သင် ဆုံးမလမ်းညွှန်နိုင်မှုက အခရာ ကျပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်မှာလည်း နောက်မျိုး ဆက်တွေ တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ရှေ့မျိုးဆက်က အစဉ်အလာကောင်းတွေ၊ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေနဲ့ ပုခုံးပြောင်း တာဝန်လွှဲအပ်ပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အစဉ်အလာထိန်းသိမ်းလာတဲ့ စံတွေကို အသေဆုပ်ကိုင်ထားပြီး နောက်လူတွေအပေါ်မှာ အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေရုံနဲ့ ပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ ဖြစ်နေတာက ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော တပ်မတော်ကြီးတရပ် ထူထောင်ရေးဆိုတဲ့ ဧရာမ ရည်မှန်းချက်ကြီးအောက်မှာ ပထမဆုံး လက်တွေ့ အကောင်အထည်ပေါ် ဆောင်ရွက်လိုက်တာက တပ်ဖွဲ့စည်းပုံ တိုးချဲ့လိုက်တာပါပဲ။ နဝတ အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက် တပ်မတော် (ကြည်း) မှာ စစ်တိုင်းဌာနချုပ်တွေ မှိုလိုပေါက်အောင် တိုးတက်များပြားလာသလို ကျနော်တို့ ရေတပ်မှာလည်း ဌာနချုပ်သစ်တွေ၊ တပ်သစ်တွေ၊ စစ်ရေယာဉ်သစ်တွေ အများအပြား တိုးပွားလာပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသော စစ်ရေယာဉ် (၁၆)စီး အပါအဝင် ရေတပ်သင်္ဘောကျင်း ဌာနချုပ်မှာ တည်ဆောက်သော စစ်ရေယာဉ်များ စုစုပေါင်းအစီး (၃ဝ) လောက် တိုးတက်များပြားလာပါတယ်။
တိုးတက်လာတဲ့ စစ်ရေယာဉ်တွေဟာ ဗိုလ်မှူးအုပ်ချုပ်သော စစ်ရေယာဉ် (B class) များနဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအုပ်ချုပ်သော စစ်ရေယာဉ် (A class) တွေသာ ဖြစ်တာကြောင့် စစ်ရေယာဉ်တစီးချင်းအလိုက် ဖွဲ့စည်းပုံအရ အရာရှိ/စစ်သည် အင်အား (၅ဝ) မှ (၁ဝဝ) ကြားခန့်အပ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတည်ဆောက်တဲ့ ဖရီးဂိတ်စစ်ရေယာဉ်တွေမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ ပိုများပါတယ်။ ဌာနချုပ်တခု အတွက်ဆိုရင် အရာရှိ (၂ဝဝ) နဲ့ အခြားအဆင့်အင်အား (၂ဝဝဝ) လောက် လိုအပ်ပါ တယ်။
သို့သော်လည်း လက်တွေ့အခြေအနေမှာ ၁၉၉ဝ ခုနှစ်လောက်အထိ တပ်မတော် (ရေ) တရပ်လုံးမှာမှ အရာရှိ/စစ် သည်အင်အား တသောင်းကျော်ရုံလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဌာနချုပ် (၄) ခု၊ ပင်မတပ် (၆) တပ်၊ ဗျူဟာစစ် ရေယာဉ်စု (၁) ခုနဲ့ သီးခြားတပ် (၄) ခု ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တိုးတက်ဖွဲ့စည်းလာတဲ့ ဌာနချုပ်၊ တပ်စခန်း၊ ရေယာဉ် တွေအတွက် အရာရှိ/စစ်သည် အင်အားပြည့်မီရေးကို လုံ့လထုတ် ဆောင်ရွက် ရပါတော့တယ်။
ကံမကောင်းချင်တော့ စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက အရာရှိ/စစ်သည်အင်အားအကြီးအကျယ် တိုးချဲ့စု ဆောင်းနေချိန်မှာ တပ်မတော်ရဲ့ပုံရိပ်က ပြည်သူလူထုအကြားမှာ မှေးမှိန်နေချိန် ဖြစ်နေတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် လျှောက်လွှာတွေကို အင်တာဗျူးအဆင့်ဆင့်နဲ့ စိစစ်လက်ခံနေရတဲ့ တပ်မတော် (ရေ) တပ်သားသစ် စုဆောင်းရေးဌာနမှာ လျှောက်လွှာ တင်မယ့်သူ မရှိ ဖြစ်နေတယ်။ သတင်းစာကနေ ခေါ်ယူပေမယ့်လည်း လိုသလောက် အင်အားပြည့်မီအောင် မရပါ။ ရဲဘော်သစ်တွေရဖို့ ငွေနဲ့ ပေးဝယ်ရင်း ပြည်တွင်း လူကုန်ကူးမှုသဘော ဖြစ်လာတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကြည်းတပ်စုဆောင်းရေး ကနေ တပ်သားသစ်တွေ ဝယ်ယူတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရာရှိအင်အား စုဆောင်းရေးမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ အရင်က စစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကို တနှစ်မှာ ဗိုလ်လောင်း (၄ဝဝ) လောက်ပဲ ရွေးချယ်ခဲ့ရာက ခုနောက်ပိုင်း နှစ်စဉ်အင်အား (၂ဝဝဝ) ကျော် လက်ခံနေတာကိုပဲ ကြည့်ပါ။ အဲဒီတော့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ အများကြီး ရှိလာရတယ်။ တိုးတက်များပြားလာတဲ့ အရာရှိ/စစ်သည်တွေကို စွမ်းရည် ထက်မြက်လာအောင် တပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး (၄) ရပ်နဲ့ ကျားကန်ပေးဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်လာတယ်။
ကျစ်လစ်ခိုင်မာတောင့်တင်းသော ခေတ်မီတပ်မတော်တရပ် ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် စိတ်ဓာတ်နဲ့ တည်ဆောက်ရမယ်။ စည်းကမ်းနဲ့ တည်ဆောက်ရမယ်။ လေ့ကျင့်ရေးနဲ့ တည်ဆောက်ရမယ်။ သက်သာချောင်ချိရေးနဲ့ တည်ဆောက်ရမယ်လို့ စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။
လေ့ကျင့်ရေးပိုင်း ကစပြီး ကြည့်ကြရအောင်။
သင်တန်းကာလတွေ လျှော့ချပစ်တယ်။ DSA ကို လေးနှစ်ကနေ သုံးနှစ်ထိ လျှော့ချလိုက်တယ်။ တပ်သားသစ်အခြေခံသင်တန်းကို ခြောက်လကနေ လေးလထိ လျှော့လိုက်တယ်။ ခုဆိုရင် တပ်သားသစ် အခြေခံသင်တန်းကို ကြည်းတပ် သင်တန်းကျောင်းမှာ တက်နေကြရတာ (၁ဝ) နှစ်လောက်ရှိသွားပြီ။ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက တပ်မတော် တရပ်လုံးကို Armynization (ကျနော်ထွင်သော အသုံးအနှုံး) ပြုလိုက်တယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
ကြည်းတပ် သင်တန်းကျောင်းတွေမှာ စစ်ပညာအခြေခံသင်တန်း သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ စစ်သည်တွေကို ရေတပ်မှာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် မနည်းပုံသွင်း ယူရပါတယ်။ စည်းကမ်းက အစပါ။ ကျနော်တို့ ရေတပ်က အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့် လုံးဝမပြုပါဘူး။ သူတို့ဆီမှာတော့ ဆေးလိပ်ကို အစည်းလိုက် လပေးနဲ့ ရောင်းတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်သာသွားတဲ့အခါ ဝတ်လစ်စလစ် သွားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကြည်းတပ်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်တဲ့ အကြပ်လောင်း၊ အကြပ်ငယ်၊ အကြပ်ကြီး၊ အရာခံဗိုလ်သင်တန်းတွေဟာ ရေတပ်အတွက် အသုံးမဝင်လှပါဘူး။ ယခင်က ရေတပ်ပင်မ ရေငုပ်နဲ့ ဆယ်ယူရေးတပ်မှာ ဖွင့်လှစ်တဲ့ ရေတပ်အကြပ်ငယ် သင်တန်းဟာ ရေတပ်ဆိုင်ရာ စစ်နည်းဗျူဟာနဲ့အညီ စစ်ပညာရပ်တွေကို သင်ကြားပေးတာပါ။
အဲဒီလို သင်တန်းမျိုးတွေကို ပိတ်ပစ် လိုက်ရပါတယ်။ ရေတပ်အရာရှိတွေဟာ ကြည်းတပ် တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်းတွေမှာ ဖွင့်လှစ်တဲ့ တပ်စုမှူး၊ တပ်ခွဲမှူးသင်တန်းတွေကို မဖြစ်မနေ တက်နေရတယ်။ အရာရှိ/စစ်သည် အားလုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ သင်တန်းကိုတက်၊ ပြီးမှအဆင့်တိုးမြှင့်ရေးကို စဉ်းစားပေးတယ်။ ရေတပ်မှာ စစ်မှုထမ်းပြီး ကြည်းတပ်သင်တန်းကို တက်မှ ရာထူးတိုးခွင့် ရတယ်ဆိုတာ သဘာဝမကျဘူး ထင်ပါတယ်။
တကယ့်လက်တွေ့မှာ ကြည်းတပ်နဲ့ ရေတပ် စုဖွဲ့ပုံချင်း တာဝန်ခွဲဝေပုံချင်း မတူညီပါ။ ရေတပ်ရဲ့အဓိက တိုက်ခိုက်ရေး အင်အားစုဟာ စစ်ရေယာဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရေယာဉ်တစီးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရ စစ်ရေယာဉ်မှူး၊ ဒုစစ်ရေယာဉ်မှူး၊ ရေကြောင်းလမ်းညွှန် အရာရှိ၊ ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိ၊ ထောက်ပံ့ရေး အရာရှိ၊ စက်မှုလက်မှု အရာရှိ စသဖြင့် တာဝန်ခွဲဝေ ထားပါတယ်။ စစ်သည်တွေအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း ရေယာဉ်အပိုင်းအလိုက် (ဦး၊ လယ်၊ ပဲ့)၊ ကျွမ်းကျင်မှုပညာရပ်အလိုက် (ကုန်းပတ် တပ်ဖွဲ့၊ ဆက်သွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့၊ စက်တပ်ဖွဲ့၊ အထွေထွေ တပ်ဖွဲ့)၊ တာဝန်ကျနေ့အလိုက် (ဖြူ၊ နီ၊ ပြာ) စ သဖြင့် ပိုင်းခြား တာဝန်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကြည်းတပ်သင်တန်းကျောင်းတွေမှာ သင်ပေးလိုက်တဲ့ စစ်ပညာတွေဟာ ရေတပ်အတွက် သိပ်ပြီး အသုံးမဝင်လှပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ တပ်မတော်မှာ လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ လေ့ကျင့်ရေးပုံစံဟာ စွမ်းရည်ပြည့် ခေတ်မီ တပ်မတော်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆိုတာထက် တပ်မတော်တရပ်လုံးအပေါ် ကြည်းတပ်က သြဇာလွှမ်းမိုးရေးကိုသာ ဇောင်းပေးနေတာ သိသာပါတယ်။ အမှန်တကယ် ခေတ်မီ တပ်မတော် ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင် (ကြည်း၊ရေ၊လေ) တပ်အင်အားစုအလိုက် စွမ်းရည် မြှင့်တင်နိုင်ရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ရေး အထောက်အကူပစ္စည်းတွေ အထိုက်အလျောက် ကောင်းမွန် တိုးတက်လာတာမှန်ပေမယ့် တဦးချင်း စွမ်းရည် ကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းမှာတော့ မျိုးဆက်အလိုက် နှိုင်း ယှဉ်လိုက်ရင် တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာတာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ရေတပ်သားတဦးဖြစ်ပါလျက် ရေမကူးတတ်သူတွေ များစွာ ရှိနေတာမျိုးပေါ့။ နည်းပညာတွေ လက်နက်ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ကျွမ်းကျင်မှု မရှိရင် အလကားပဲ။ နောက်တချက်က ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနည်းသူဟာ အခွင့်အရေးကို ဖြတ်လမ်းက လိုက်တတ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တပ်ထဲမှာ သူများငယ်ထိပ်နင်းပြီး အခွင့်အရေးယူတာတွေ အကျင့်ပျက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာပဲ။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စရှိတယ် ဆိုတာကလည်း မွေးရာပါ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းထက် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်မှုနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ရရှိတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
သက်သာချောင်ချိရေးအပိုင်းမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာ တပ်မှူးကိုသာ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းစေတာတွေက များပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်သည်မိသားစု သက်သာချောင်ချိရေး အကြောင်းပြချက်နဲ့ တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါ မသမာမှုတွေ၊ ဥပဒေဘောင်ကျော် လုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ လစာတွေတိုးလာတော့ တပ်ပိုင်စီးပွား လုပ်ဆောင်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်ပြန်တယ်။ လစာနှုန်းထားတွေ ခဏခဏ ပြောင်းလဲသတ်မှတ် ပေးနေပေမယ့်လည်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် စစ်သည်မိသားစုတွေ ဖူလုံလောက်ငှမှု မရှိပါ။ လက်ရှိ လစာနှုန်းထားအရ တပ်ကြပ်ကြီးတဦးရတဲ့လစာဟာ ကျပ်သုံးသောင်းကျော်ပေမယ့် အမေရိကန် ဒေါ်လာငွေနဲ့ တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် (၃ဝ) ကျော် လောက်ပဲရှိတာပါ။ တကယ်တန်းမှာလည်း စစ်သည်တွေအပါအဝင် ဝန်ထမ်းအားလုံး အလိုရှိနေတာက လစာတွေ ဘုန်းပေါလအော ထုတ်ယူဖို့မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ရတဲ့လစာ၊ ရိက္ခာနဲ့ မိသားစု ဣနြေ္ဒသိက္ခာရှိရှိ နေနိုင်စားနိုင်ဖို့ပါပဲ။
ခုတော့ စစ်သည်အများစုက စစ်မှုထမ်းရတာဟာ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ ထောင်ကျတာလို့ မြင်နေကြပြီ။ လေ့ကျင့်ရေးပိုင်းနဲ့ သက်သာချောင်ချိရေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအပိုင်းမှာ အားနည်းလာတဲ့အခါ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု လျော့ရဲလာတယ်။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ကျဆင်းလာတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တတွေ ခြစားလာတယ်။ အပြန်အလှန်လေးစားမှု ကင်းမဲ့လာတယ်။ တပ်တွင်း အမှုအခင်းတွေ၊ တပ်က ထွက်ပြေးတာတွေ ပိုပို များပြားလာတယ်။ အရာရှိ တပ်ပြေးမှုတွေ များလာတယ်။
သင်တန်းဆင်းပြီးကာစ အရာရှိငယ်တွေ တပ်၊ စခန်း၊ ရေယာဉ် ရောက်လာတဲ့အခါ ဆရာကြီးတွေကို ဦးလေးခေါ်လို့ ခေါ်၊ အကိုခေါ်လို့ ခေါ်။ တချို့ရိုင်းပြသူတွေကြတော့လည်း ကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ်များစွာ ကြီးရင့်တဲ့သူတွေကို “မင်း” “ငါ” နဲ့ ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းကြတယ်။ အရာရှိငယ်အချို့ အရာရှိတဦးနဲ့ မလျော်ညီတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ၊ ဝတ်စား နေထိုင်မှုတွေကြောင့် တပ်မှူးတွေ လိုက်ပြီး ဖြေရှင်းရတာလည်း ခဏခဏ ကြုံဖူးပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ အတူနေခဲ့ဖူးတဲ့ တပ်မှူး တဦးက “နောက်ပေါက် အရာရှိတွေရော စစ်သည်တွေပါ selfish ဖြစ်တာများတယ်” လို့ မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
ကျနော့အမြင်ကတော့ အတ္တကြီးတယ် တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ် ဆိုတာ တဦးချင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ ထင်မိပါတယ်။
စစ်သည်တွေအပိုင်းမှာလည်း အားနည်းချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း တပ်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ ရဲဘော်တွေဟာ အမိန့်နာခံမှု အားနည်းတယ်။ အလုပ်ဆိုရင်လည်း ပြီးစလွယ် လုပ်တတ်တာများတယ်။ ပြီးတော့ တပ်ကို မလာဘဲ လနဲ့ချီပြီး ပျောက်နေလို့ အိမ်တိုင်ရာရောက် သွားပြီး ချော့မော့ခေါ်ရသူတွေ အများကြီးရှိတယ်။
အဓိကအကြောင်းအရင်းက စစ်သည်တွေ တပ်နေ မပျော်ကြတာပဲ။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲလို့ မေးရင် ကျနော်ကတော့ တပ်မတော် ထိပ်သီးကြီးတွေကိုပဲ လက်ညှိုး ထိုးပြချင်တယ်။ အာဏာ ကုလားထိုင် ပျောက်မှာစိုးလို့ သူတို့ဆန္ဒအလျောက် တပ်မတော်အင်အားကို မဆင်မခြင် တိုးချဲ့လိုက်တဲ့အတွက် မလွှဲမရှောင်သာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေလို့ပဲ။
အရာရှိစစ်သည်တွေအနေနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ပင်မတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့ စစ်တိုက်ရန်၊ စစ်တိုက်ရန်မရှိက လေ့ကျင့်ရေး လုပ်ဆောင်ရန်၊ လေ့ကျင့်ရန်မရှိက ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် ဆိုတဲ့ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရာမှာ လက်ရှိအနေအထားအရ စစ်တိုက်ရန် သိပ်မရှိပါ။ လေ့ကျင့်ရေးကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိပါ။
လူထု အကျိုးပြုလုပ်ငန်း ဆိုရာမှာလည်း ပြည်သူ လိုအပ်ချက် ဆိုတာထက် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနေရတာ များပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်အင်အားဟာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် မြန်မာပြည်လူဦးရေရဲ့ တရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရက တိုင်းပြည် GDP (၄ဝ) ရာခိုင်နှုန်းကို ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်အဖြစ် သုံးစွဲနေကြောင်း ဆိုကြလေတော့ တပ်မတော်ကြီး တကယ်ပဲ ခေတ်မီသွားပြီလား။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက မြန်မာပြည်ဖွား အမျိုးသားထုရဲ့ ငါးရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ တပ်မတော်က ကျွေးသောရိက္ခာကို စားဖူးပြီး တပ်မတော်သား သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ပြား အနည်းဆုံးတခုကို ကိုင်ဆောင်ဖူးကြပါတယ် (စစ်မှုထမ်းဖူးတာကို ဆိုလိုတာပါ)။ အများစုဟာ လက်ရှိ တပ်မတော်ထဲမှာ မရှိပါဘူး။ အဲဒီအထဲမှာ စစ်သားလုပ်တမ်း ကစားသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အချိန်မတန်မီ တပ်မတော်ပြင်ပကို လွင့်စင် ရောက်ရှိသွားတဲ့ အရာရှိ/စစ်သည်တွေကိုသာ စနစ်တကျ ပြန်လည် စုစည်းနိုင်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိ တပ်မတော်အင်အားထက် မလျော့သော တပ်မတော်သစ်တရပ် ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ခေတ်ကတော့ ရဲဘော်ဟောင်းတွေကို ဗိုိလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်စုဖွဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေးအရန် အင်အားအဖြစ် စုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်။
ခုချိန်မှာတော့ သိပ်မလွယ်ဘူး ထင်တယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနေအထား ကွာခြားသွားသလို ခေါင်းဆောင်အပေါ် ယုံကြည် ချစ်မြတ်နိုးစိတ်ကလည်း မတူညီနိုင်ကြတော့လို့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ လက်ရှိ တပ်မတော်ထဲက အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည် ကြုံတွေဖြတ်သန်းနေရသော အကျပ်အတည်းတွေဟာ “တပ်မတော်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမည်” လို့ အဆက်မပြတ် ကြွေးကြော်နေသော စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအတွက် ထာဝရ စိန်ခေါ်ချက်များသဖွယ် ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
Posted by နော်မန် at 1:30 AM
အောက်ဖော်ပြပါ ဓာတ်ပုံမှ လူနာ မခိုင်ခိုင်ဝင်း (အသက် ၃၆-နှစ်) သည် ၀ံသာနုလူငယ်များ၏ အကူအညီဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ ၆-ရက်၊ ၂၀၁၀ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ Universiti Malaya Hospital, Ward 6U (Surgery), Bed 51 တွင် တက်ရောက် ကုသနေရပါသည်။
မခိုင်ခိုင်ဝင်း သည် ဦးနှောက် ပြည်တည်ရောဂါနှင့် နှလုံး သွေးကြောကျယ်ရောဂါတို့ ခံစားရ လျှက်ရှိပြီး ဦးနှောက်နှင့် နှလုံးကို မဖြစ်မနေ ခွဲစိတ် ကုသခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ခွဲစိတ်ကုသစရိတ်မှာ ဆရာဝန်၏ ပြောကြားချက်အရ ခန့်မှန်းခြေ ၇၀၀၀-ရင်းဂစ်အထက် ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လူနာနှင့် လူနာရှင်တို့မှာ လုံလောက်သည့် ငွေကြေးမမာဏမရှိဘဲ အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသည်။
စေတနာအလျှောက် အကူအညီ ပေးလိုကြသူများအနေနှင့် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ် ကူညီပေးကြပါရန် လေးစားစွာ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ကိုမင်းအောင် (လူနာရှင်) +6017 370 3405
ကိုကျော်ထက်မင်း (၀ံသာနု) +6010 219 0921
source by : http://www.mgpala.com
Posted by နော်မန် at 8:36 AM
တာ့ကော်ကျိုးနဲ့ ကဆောဝါးလေးကြားက လေးဒေး နေရာမှာ ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ တိုက်ပွဲဖြစ်
ဒီကနေ့ ဝေါလေဒေသ တပ်ကော်ကျိုးနဲ့ ကဆောဝါးလေးကြားမှာ နအဖ စကခ (၁၂) လက်အောက်ခံ ခမရ ၅၄၉ နှင့် ဒီကေဘီအေ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်နဲ့ မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဒီနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီခန့်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ နအဖ ဘက်မှ ၁၅ ဦး ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပြီး ဒီကေဘီအေ ဘက်မှလည်း ၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပြီး နအဖ ဘက်က တိုက်ပွဲထဲမှာ အသုံးပြုဖို့ ခေါ်လာတဲ့ အကျဉ်းသား ၆ ဦး လည်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယခု ဝေါ်လေဒေသ ထိုးစစ်အတွက် နအဖ ဘက်က တပ်ရင်း ၁၀ ရင်း ကို အသုံးပြုပြီး အင်းစိန်၊ မော်လမြိုင်၊ ဘားအ၊ံ တောင်ကလေး က အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း ၈၀၀ ကို တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ အသုံးပြုဖို့ ခေါ်လာတယ်လို့လဲ ကြားသိရပါတယ်။ ဒီနေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေရာဟာ လေးဒေးလို့ခေါ်တဲ့ နအဖ စခန်းဟောင်း နေရာတခု ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုစခန်းနေရာဟာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က ဖလူးစခန်းကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ စခန်းကုန်း တနေရာဖြစ်တယ်လို့ ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ ၅ ကလို့ထူးဘော ဗျူဟာမှ ဗိုလ်ဆန်းအောင်က ပြောပြသွားပါတယ်။
ဖလူးစစ်ဒေသ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ အခြေအနေ (ရုပ်သံ)
source by : http://www.naytthit.net (http://www.youtube.com/user/yamounnar)
Posted by နော်မန် at 8:23 AM
စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ မြန်မာစစ်အစိုးရ ပြဋ္ဌာန်း
အရွယ်ရောက်သူတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို စစ်အစိုးရက ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်း ထွက်လာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါ။ မကြာခင် ခေါ်ယူတော့မယ့် လွှတ်တော်ထဲမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ လွှတ်တော် မခေါ်ခင်မှာ စစ်အစိုးရက ဒီဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာက ဥပဒေနဲ့ မညီဘူးလို့ သုံးသပ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသိင်္ဂီထိုက်က တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို စစ်အစိုးရက ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က တရားဝင် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်လို့ ဂျပန်သတင်းဌာန NHK က ဖော်ပြပါတယ်။ စစ်အစိုးရ သတင်းစာတွေမှာတော့ ဒီဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ထားတာ မရှိသေးပါဘူး။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာတော့ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ့် အစိုးရသစ် မပေါ်ပေါက်ခင်မှာ အခုလို လုပ်ဆောင်တာက ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတခု ဖြစ်တယ်လို့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အင်အားစု (NDD) ရဲ့ သုတေသနမှူး ဦးဌေးအောင်က ပြောပါတယ်။
“ဒါမျိုးတော့ လုပ်လို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါမျိုးက စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆက်ကျင့်သုံးနေတဲ့ စစ်အစိုးရဆိုရင်တော့ သူတို့ ဥပဒေအရ ပေါ့ဗျာ၊ သူတို့ ပါးစပ်ထဲကထွက်တာ ဥပဒေဆိုတော့ သူတို့ ပြဋ္ဌာန်းချင်ရင် ပြဋ္ဌာန်းလို့ ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအချက်တွေကို လွှတ်တော်မှာ တင်ပြီးတော့ပေါ့လေ ဥပဒေပြုရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ အဲဒီ ဥပဒေပြုပြီးတော့မှပဲ ဒီဟာက ပြဋ္ဌာန်းရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့ဗျာ။
“အခုကတော့ လွှတ်တော်တောင် မခေါ်ရသေးဘူး၊ အစိုးရတောင် မဖွဲ့ရသေးဘဲနဲ့ ဒီ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ အခုလို ပြဋ္ဌာန်းတာကတော့ ဒါ တရားဥပဒေဘောင်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘောင်မ၀င်ဘူးလို့ ကျနော်တော့ ထင်ပါတယ်။”
အခုကျင့်သုံးမယ့် ဥပဒေအရ အမျိုးသမီးတွေက အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ ၃၅ နှစ်ကြား၊ အမျိုးသားတွေက အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ ၄၅ နှစ်ကြား အရွယ်ရောက်သူတိုင်း စစ်မှုထမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှုထမ်း သက်တမ်းက ၂ နှစ်ကနေ ၃ နှစ်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင် အာဏာပိုင်တွေထံကို စာရင်းပေးသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှုထမ်းရေး စာရင်းပေးသွင်းဖို့ ပျက်ကွက်မယ် ဆိုရင်တော့ ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ထိ ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း စစ်တပ်အင်အားကို လျှော့ချဖို့ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားတဲ့ တိုင်းပြည်တချို့မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကတော့ အမြဲတမ်း စစ်အင်အားကို မလျှော့ဘဲ အခုလို စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်အင်အားကြီးထွားအောင် လုပ်ဆောင်မှုတခုသာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးဌေးအောင်က ရှုမြင်ပါတယ်။
“အမြဲတမ်း စစ်အင်အားကို လျှော့ချနိုင်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အတွက်၊ စစ်တပ်အတွက် အသုံးပြုနေရတဲ့ ငွေကြေးတွေမှာ ကျနော်တို့ အများကြီး လျှော့ချနိုင်မယ့် အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ နောက်တခုကလည်း ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးက ဒီစစ်ပညာကို တတ်ကျွမ်းထားခြင်းအားဖြင့်ပေါ့ဗျာ၊ ပြည်ပကျူးကျော်မှုကို ရင်ဆိုင်လာရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးရှိတော့ ဒါက တပိုင်းကကြည့်မယ် ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကောင်းတဲ့အနေအထား ရှိပါတယ်။
“ဒါပေမဲ့ ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေ အခုလို အတင်းအကျပ် ပြဋ္ဌာန်းတာကျတော့ သူတို့ရဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို သက်ဆိုးရှည်အောင်၊ နောက်တခုကလည်းပဲ ပြည်သူလူထု ကိုယ်နှိုက်က ဒီစစ်တပ်ရဲ့ ပုံစံအရ သူတို့ရဲ့အမိန့်တွေကို နာခံတတ်တဲ့အကျင့် ဖြစ်လာအောင် သူတို့က ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်တာ ဆိုရင်တော့ ဒါ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မှားနေတယ်၊ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က အကျိုးမရှိဘူးလို့ပဲ ကျနော်တို့ ပြောချင်ပါတယ်။”
နိုင်ငံတကာက ကျူးကျော်ရန်စမှုကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့နဲ့ စစ်တပ်အသုံးစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတချို့က ဒီဥပဒေကို ကျင့်သုံးလေ့ ရှိကြပေမဲ့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနေအထားက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်တွေလည်း ရှိနေသေးတာကြောင့် စစ်တပ်အင်အား တိုးချဲ့ဖို့ ကြိုးစားလာတာက ပြည်တွင်းစစ်မီး တိုးပွားလာမယ့် အရေးကိုလည်း စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
အခုလို စစ်မှုမထမ်းမနေရ လုပ်လိုက်တာကလည်း တပ်မတော်အတွက်ရော ပြည်သူအတွက်ရော ကောင်းတဲ့ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဦးဌေးအောင်က ဆိုပါတယ်။
“လူတွေရဲ့ စိတ်ဆန္ဒ မပါဘဲနဲ့ အတင်းအကျပ် လုပ်ခိုင်းလို့ လုပ်ရတဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှက အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသင့်သလောက် ရှိမယ်လို့ ကျနော် မထင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးလို့ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ တပ်မတော်ထဲကို ၀င်တာမျိုးမှသာလျှင် ဒါဟာ တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်လည်း အကျိုးရှိမယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။ တပ်မတော်အတွက်လည်း ဒါမျိုးမှ အကျိုးရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
လတ်တလော အနေအထားမှာတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို စစ်သားစုဆောင်းမှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေက ဝေဖန်မှုတွေ ဖြစ်နေတာ ရှိပါတယ်။
Posted by နော်မန် at 10:43 PM
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း နအဖ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်
နေ့လည် (၁၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်) ယခုတိုက်ခိုက်နေသည့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နအဖ ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးများတွင် လက်နက်ကြီးကျရောက်သည့် ကိုက်တရာအတွင်းရှိလူများ နားစည်များမှ သွေးယိုသည့် ဓါတုလက်နက် ပစ္စည်းများ စမ်းသပ်အသုံးပြုမည်ဟု ကောလဟာလ သတင်းများထွက်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
နံနက် (၁၁ နာရီ ၅၀ မိနစ်) နအဖ ဘက်မှ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားသော ယခု စစ်ဆင်ရေးများတွင် အင်းစိန်ထောင်၊မော်လမြိုင်ထောင်၊ဘားအံ(တောင်ကလေး)ထောင်တို့မှ အကျဉ်းသားများအပြင် လက်နက် ရိက္ခာသယ်ယူရန်နှင့် လူသားမိုင်းရှင်းကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုရန် အကျဉ်းသားများ မလုံလောက်သဖြင့် တောင်ငူထောင်မှ အကျဉ်းသားများကိုလည်း ထပ်မံခေါ်ယူထားကြောင်းသိရှိရသည်။
နံနက် (၁၁ နာရီ ၄၀ မိနစ်) နအဖ စစ်ဆင်ရေးနဲ့ ကွပ်ကဲရေးဌာန လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများ ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၁)၊တပ်မဟာ(၆)နဲ့ တပ်မဟာ(၇) နယ်မြေတွေကို ယမန်နေ့ကနေ စတင်ပြီး အင်အား အလုံးအရင်းနဲ့ တပြိုင်နက် ထိုးစစ်ဆင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
- နအဖ တပ်များမှာ စကခ(၁၂) နည်းဗျူဟာ(၁)နှင့် (၂)လက်အောက်ခံ ခလရ(၂၃၁)၊ ခမရ(၅၄၆)၊ ခမရ (၅၄၈)၊ ခမရ(၅၄၉)၊ ခမရ(၃၅၆)၊ ခမရ(၃၅၇)နှင့် ခမရ(၅၄၅) တပ်ရင်းများဖြစ်ပြီး ကေအဲန်ယူ၊ ဒီကေဘီအေတပ်များနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရသည့် နအဖတပ်များမှာ
- စကခ(၁၉) နည်းဗျူဟာ(၂)မှ ခလရ(၂၉၉)မှ ချူကလီးဒေသတွင် ထိုးစစ်ဆင်၊
- ခမရ(၅၈၆)မှ အူးကလေးထာ့ရွာတွင် အခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေပြီး ဖားအံမြို့အခြေစိုက် လှုပ်ရှား၊
- နအဖ တပ်မ(၂၂) လက်အောက်ခံ နည်းဗျူဟာ(၂၂၂) လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများဖြစ်သည့် ခမရ (၂၀၉)၊ (၂၀၁)၊ (၂၀၂)နဲ့ (၂၀၅)တပ်ရင်းမှာ ကမမောင်းကျေးရွာဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်လှုပ်ရှား၊
- မာနယ်ပလော နယ်မြေတွင် စစ်ဆင်ရေး လှုပ်ရှားဖို့အတွက် နည်းဗျူဟာ(၂၂၃)သည် ရှမ်းရွာသစ်ဘက်တွင် ထိုးစစ်ဆင်ပြီး၊
- နည်း ဗျူဟာ(၂၂၃) လက်အောက်ခံ တပ်များဖြစ်သည့် ခလရ(၈၁)၊ ခမရ(၂၀၄)၊ (၂၀၈) တပ်များမှာ ဆင်ဖြူတောင်(ကဆောဝါးလေး)ဒေသ ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
နံနက် (၁၁ နာရီ ၃၅ မိနစ်) ယမန့်နေ့က ဝေါလေဒေသ ဖလူးကျေးရွာနားမှာ နအဖ တပ်တွေနဲ့ ဒီကေဘီအေ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ယမန့်နေ့ မနက်ပိုင်းမှ စပြီး နအဖ စစ်တပ်တွေ ဒီကေဘီအေတပ်တွေကို အရှိန်အဟုန်မြင့်ပြီး တိုက်ခိုက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
Posted by နော်မန် at 12:32 AM
မြန်မာ ၁၁ ဦးပါတဲ့ တောင်ကိုရီယားသင်္ဘောကို ဆိုမားလီး...
ဖလူးစစ်ဒေသမှာ နအဖ အသုံးပြုတဲ့ အကျဉ်းသား အထမ်းသမား၊...
ကားခ တိုးမြှင့်မှုကြောင့် ကလေးမြို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်း...
သိမ်းဆည်းလယ်မြေ လျော်ကြေးရဖို့ လယ်သမား ၃၀၀ ကျော်ေ...
တာ့ကော်ကျိုးနဲ့ ကဆောဝါးလေးကြားက လေးဒေး နေရာမှာ ဒီေ...
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း နအဖ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ထိုး...